အဖွူရောငျ အိမျလေးတလုံး: April 2009
အခုအခါ မြန်မာပြည်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Hand Made Fancy လက်ဆောင်ပစည်းလေးတွေ နဲ. အမှတ်တယ
ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပြီး ဂျပန် အင်္ဂလန်စတဲ့ နိုင်ငံတွေကို တရားဝင် တင်ပို. နေတဲ့ ဒီဇိုင်နာ နတ်မိမယ် ရဲ့ လက်ရာလေးများ အမှတ်တယ
ဘာမှထူးခြားတဲ့ ပစည်းတွေ မသုံးပဲ အမွှေးဆပ်ပြာခဲလေးတွေ နဲ. အလှဆင်ထားတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေ
Posted by မင်းအိမ်ဖြူ Minn Eain Phyu0ခံစားချက်
မြို.တော် ခန်းမ ညအလှ
၂၈ထပ်မှ ဖူးမျှော်ရတဲ့ ဆူးလေစေတီ
တစ်ယောက်တည်းသောက်ခဲ့ရတဲ့ သီရိပစရာမှ ကော်ဖီတစ်ခွက်
Posted by မင်းအိမ်ဖြူ Minn Eain Phyu 1 ခံစားချက်
အိပ်မက်ထဲက တက္ကသိုလ် ၊၊
( ဆရာမောင်စိန်ဝင်း၏ အလွမ်းကဗျာလေးတပိ်ုင်းတစ)
ဘာမှမရေး တာက အညွှန်းစာတွေ ရေးထားတာထက် ပိုပြီး ငြိမ်ငြိ်မ်လေးနဲ. လွမ်းရမယ်လို. ထင်မ်ိလို. ဘာစာမှ မရေးလိုက်တော့ပါ ၊၊ အမှတ်တယတော့ ဖြစ်မိသား .............
Posted by မင်းအိမ်ဖြူ Minn Eain Phyu3ခံစားချက်
အသွား ရှိရင် အပြန်ရှိတယ်တဲ့
ဒါကြောင်.လည်း နိယာမလို. ဆိုကြသကိုး .................
ဆောင်းပေါင်း သုံးဆယ် ဒီနိယာမဆိုတာလေးကို ပဲ
မမှားသော အမှန်တရားကို နိယာမဆိုတော့
အငြင်းလည်းမပွား လိုပါဘူး ................
နွေတွေ၊ မိုးတွေ ၊ ဆောင်းတွေ
အလီလီ ပြောင်းလို. အမြင်တွေလည်း
အခါခါတွေ များ လာခဲ့လေတော.
နိယာမများ မှားလေသလားကွယ် ...................
သံသယတွေ အခါခါ ပွားလို. ထပ်ခါထပ်ခါ
ရတော. ရ သား
ကိုယ် သွားတဲ့ ဆီက
ကိုယ် ပေးတဲ့ ဆီက
မဟုတ်တာ အခါခါတွေ.ရပြန်တော. ...............
Angle လေးများ လွဲလေသလားရယ်လို. ၊၊
Angle မလွဲသည်. တိုင် ပြန်စွမ်းအင်ပေး
ပြဒါးလေး မရှိရင်လည်း ပြန်မရနိုင်တာ
လက်တွေ. ဘ၀ရဲ့ သင်္ခန်းစာ ၊၊
အဲဒါ ဘ၀ကပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာ ၊၊
( ပေးတိုင်းမရရ်ျ စိတ်တိုင်းမကျလေတိုင်း Angle လေများ လွဲလေသလားလို. စဉ်းစား ပြီး ဖြေသ်ိမ်.ကြည်.ပါ လို. )
( ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ မှန်လေးက ၊ နေရာလေးက ပြဒါးကွာနေရင်လည်း ကိုယ် ပေးတာ Angle မှန်ပေ သည်. တိုင် ကိုယ်ထံ ပြန်မလာ နိုင်တော.တာလည်း မမေ.စေချင်ပါ ၊၊ )
Posted by မင်းအိမ်ဖြူ Minn Eain Phyu5ခံစားချက်
" မြတ်နိုးရ်ိပ် " မှာ ထမင်းစားတဲ့. အခါတိုင်း သတိယမိတဲ့ စိတ် ကို ထိန်းချုပ်လို. မရမှန်းသိ လို. ဘယ်တော.မှ မစားဘူးလို. ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ကြားက ရောက်တိုင်း ၀င်မိတဲ့ စိတ် ကို ဘာသာ မကျေမနပ် ဖြစ်မိသည် ၊၊ စားပြီးရင် ခံစားရသည် ၊၊ စားပြီးတိုင်းလည်း နောက်မကြိမ် မလာဘူးရယ်လို. အကြိမ်ကြိမ် စိတ်ထဲမှာ တွေးမိ သည် ၊၊ ဒါပေမယ်.လည်း ၃ နှစ်မက ကြိုးကျခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းတွေက ဘာသာ ခေါ်ဆောင်သွားနေကျ ၊၊ ရောက်ဖြစ် တဲ့ အခါတိုင်းလည်း မှာမထားပါလျက် ကန်ဇွန်းပလိန်း တစ်ပွဲရယ် ၊ ကြက်ချဉ်စပ်ရယ် ၊ ကြက်ဥ မွေကြော်တစ် ပွဲရယ် က အဆင်သင်. ၊၊ ဇွန်း ခရင်းတစ်စုံ နဲ. လက်ကိုင်ပ၀ါလေးက ဘေးနားမှာ ငြိမ်လို. ၊၊ အရာအားလုံး ဟာ ကျောင်းတက်နေတုန်းက အတိုင်း ၊၊ မရှိတော.တာက မလေးငယ်ဆို တဲ့ အမျိုးသမိးတစ်ဦး ရယ်သာ ၊၊
ကံကောင်းတယ်လို. ဆိုမလား ၊ ကံဆိုးတယ်လို. ပြေမလား၊၊ ဘ၀မှာဘယ်တော. မှ မေ.လို.မရတဲ့ စွယ်တော် နန်း နဲ. နီးနီးနားနား စီမံကိန်းမှာ တာဝန်ကျတာ ၊၊ အလုပ်ပြောင်းရွှေ. မိန်.စာ ရတော. ၀မ်းသာသလို ၀မ်းနည်းသလို ၊၊ မလေးကိုလည်းပို သတိယမိသလို ၊၊ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ကို နှစ်ထားပေမယ်. တခါတလေတော. နင်.နင်.သည်းသည်း သတိယမိတာ အမှန် ၊၊ မလိမ်ညာချင် ၊၊ နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းတစ်ပါးမှာ ငွေအတွက်လည်း မဟုတ်ပါပဲ သွားနေတဲ့ မလေးကို တခါတခါ တမ်းတမိတာတော. မညာချင် ပါ ၊၊ မလေးလို တကယ်တော်တဲ့ မိ်န်းမတစ် ယောက်ကို နိုင်ငံအတွက် နှမြောမိသည် ၊၊ မလေးက ပြောသည် ၊၊ ငွေလိုချင်ရင် ငါအိမ်မှာ စိပွားရေး လုပ်လို. ရသည် တဲ့ ၊၊ ဟုတ်ပါတယ် လေ ၊၊ မလေး ချမ်းသာတာလည်း သိပါတယ် ၊၊
ကံဆိုတာ လူကလုပ်တာမို. ကံကိုရိုးမယ် ဖွဲ. ဘ၀ကို အရှုံးပေးနေတဲ့ သူတွေကို မလေးအ မုန်းဆုံးပါတဲ့ ၊၊ လုပ်တိုင်းဖြစ်တဲ့ မလေးငယ် ၊၊ ခုချိန်ထိလည်း အောင်မြင်မှူ သရဖူတွေ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ဆောင်းနေ ဆဲဆိုတာ ကြားတော. မလေးအတွက် ဂုဏ်ယူမိသည် ၊၊ နောက်နောင်လည်း ထိထက်ပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေ လို. ဆုတွေ တောင်းနေ ဆဲပါလေ၊၊ ချမ်းသာတဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်းက ပေါက်ဖွားလာသူမို. ငွေစကားမပြောတက်ပေမယ့် တကယ်. ဘ၀တွေကို မမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မလေးကို ရှင်းပြဖို.လည်း ဘယ်တုန်းက မှ မကြိုးစားခဲ.ဘူးပေ ၊၊ မလိုအပ် လို.လည်းထင်မှတ်ခဲ့ သည်၊၊ ၅ တန်း ၆ တန် ကျောင်းသား အရွယ်ကတည်းက အမေပေးတဲ့ ရွှေထုပ်လေး ကိုင် ပြီး ငွေသွား ချေးရတဲ့ ဘ၀ ဆိုတာကို မလေးများ သိရင် ဘာများပြော အုံးမလဲ ၊၊ မှတ်မိသေးတယ် အဲဒီ ရွှေဆိုင် ပိုင်ရှင် မိန်းမကြီးရဲ့ အပြော မောက်မောက်မာမာကို ၊၊ ဒီတစ်ခေါက် အိမ်ပြန်တော. အဆင်မပြေ ဘ၀ပျက်နေ ကြ တာ တွေ.တော. သူတို.အတွက် ၀မ်းမသာ စကောင်းပေမယ်. သွားတော. နှူတ်ဆက်လိုက် ချင်စမ်း ပါရဲ့ သို.သော် အသိတရားက ခွင်.မပြုခဲ့ပါ ၊၊
အကြီးတွေအားလုံး တပြိုင်တည်း တက္ကသိုလ်ဆိုတာ ကို သွားနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ၊ အိမ်မှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဘ၀တွေက ဟိုရှေ.က လူတွေ မျက်နှာမငယ်ဖို. ချိုးခြံ ချွေတာခဲ့ ရပါတယ် ဆိုတဲ့ ဘ၀တွေကို မလေးများသိရင် ဘာများပြောအုံးမလဲ ၊၊ မနက် အိပ်ရာထတာနဲ. ဈေးဆိုင်ဝင် ၊၊ ကျန်တဲ့ အစ်မ ၂ ယောက် ဈေးရောင်းဖြောင်. စေဖို. မနက်စာ ပြင်နေရတဲ့ ၄ တန်းကျောင်းသား အရွယ် အမောင်ငယ် ဟာ မောင်မိုးပါ ဆိုရင် မလေးဘာ ဆိုအုံးမလဲ ၊၊ ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းကို မောင်နှမတွေ ကသုတ်ကရုတ်ပြေးလို. စာတွေ သင်ကြပေါ့ ၊၊ ကျောင်းဈေး ဆိုင်တန်း က အစ်မကြီးက မောင်မိုးဆီက ပိုက်ဆံရရင် ထီထိုးမယ် လို. အနောက် ခံရတဲ့ အထိ တို.များ မောင် နှမတွေ တကြီမ်ဘူးမျှ ကျောင်းဈေးဆိုင်မှာ မုန်.၀ယ်မစားဘူးတာ တစ်သက်နဲ. တစ်ကိုယ် ၊၊ ၃ တန်း ၄ တန်း ကျောင်းသားဘ၀ မှာကတည်းက ကျောင်းတက်ရင်းမုန်.ရောင်းစားခဲ. ဘူးပါတယ် ဆိုရင် မလေး အံ့သြမလား၊၊
ဆိုင်မှာ ရောင်းတဲ့ ပြား ၈၀ တန် မုန်းတစ်ထုပ်ကုန်ရင် တစ်ကျပ်နဲ. ၂၅ ပြားရတယ် ၊၊ လွယ်အိတ်ထဲမှာ တင် ဈေး ဆိုင် တည် ထားခဲ့ တာ ၊၊
မလေးမသိခဲ့ ဘုးတဲ့ အမောင်.ဘ၀ ထဲက တစ်စိတ်တဒေသပေါ့ ၊၊ ဒီလို ဒီလိုနဲ အမောင်.ဘ၀ ပေါ . ၊၊ ဟိုတုန်း က မောင်မိုးဆိုတာ အခု ထိုင် ပြီးထမင်းစားနေတဲ့ အရာရှိကြီးပါ ဆိုရင် ယုံကြမယ်မဟုတ် ဘူးလေ ၊၊ သြော် မလေးငယ် နိုင်ငံခြား သွားတော. လိုက်ချင်လိုက်တာ ၊၊ မောင်မိုး အကိုကို ပြောပြတော. အကိုက တသက်မမေ့ စရာ ပြောပေးခဲ့တာ ၊၊ အေး ငါတို.က သူများလို ချမ်းသာတာ မဟဟုတ်ဘူး ၊ အခြားလူတွေ အတွက် နောက် တစ်ကြိမ်ဆိုတာ ရှိတယ် ၊၊ ငါတို.အတွက် စမ်းသပ်ခွင်.မရိုဘူး ၊၊ မင်းသွားချင်ရင်တော. ငါမရရအောင် ရှာပေး မယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. သေတော. သေချာမစေနော်တဲ့ ၊၊ မလေး ရေ မလေးတို. အတွက် ၂၀ ၊ အစိတ် ဆို တာ ဈေး သွား ငါးဝယ် ၊ Shopping ထွက်သလောက် ရှိပေမယ် ၊ မောင်မိုးတို. ဘ၀ကို ကြည်.ပါအုံး ၊၊ အသက် ၂၃ ။၂၄ အရွယ် အလုပ်မလုပ်ဘူးတဲ့ ကောင်လေးက ဘယ် လို အာမခံချက်တွေနဲ. ဒီငွေတွေကို ယူဝံ့ပါ.မတုံး ၊၊
မလေးသိနေတဲ့ အစ်ကိုအကြီးဆုံ ဆိုတာက အပြောသက်သက်လေ ၊၊ ဘာမှမကူညီတဲ့ အပြင် အငယ်တွေကို စ်ိတ် ဒုက္ခတွေပါ ပေးသေးရဲ့ ၊၊ အခုအချိန်မှ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံရရင် မလေး တို.ဘက်က ငွေအကူ အညီကို သာ ရ ခဲ့ရင် အဲဒီတုန်းက လက် ခံမိမှာ အမှန်ပဲ ၊၊ မရှက်တမ်း ပြောတာပါမလေးရယ် ၊၊ အဲဒီအချိန်တွေ ကို ပြန်မတွေး ချင်ပါဘူး ၊၊ အဆိုးဝါးဆိုး ဖြတ်ကျော်ခဲ့ ရတဲ့ ဘ၀ ရဲ့ အစိတ် အပိုင်းေ တွ ပဲ ၊၊
ဒီနေ. လည်း ထူးထူးခြားခြား ကျေင်းကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပြန်တာ ပေါ့၊၊ မလေး ရယ် မောင်မိုး ရယ် ပျော်ခဲ့ဘူး တဲ့ ကျောင်းကြီး ကတော့ ရောက်လာ တဲ့ သူတိုင်းကို ပျော်စေနေတုန်းပေါ့ ၊၊ တို.များလို ဘယ် နှစ်တွဲများ ကွဲလို. ဘယ်နှစ်တွဲများ ပေါင်းရမလဲ ကျောင်းကြီးကတော. သိရှာမယ် ထင်ဘူး ၊၊ လက်ခုပ်ပင် ကြီကလည်း ထီတည်း တစ်ပင်တည်း ၊၊၊ ခုများတော. ကိုယ် နဲ. ဘ၀တူပေါ့လေ ၊၊ ဘွဲနှင်းသဘင် လမ်းဘေးက ရေတမာစောက်ထိုး တွေက အရင် ထက်တောင် ဝေစည် လို.ရယ် ၊၊ ကိုယ်တို. လက်တွေ.၀င် ရတဲ့ လက်တွေ.ခန်း ဘက်လည်း စားသောက်ဆိုင် တွေနဲ့ ဝေစည် လို ရယ် ၊၊ ဗိသုကာ ဌာန က အဆောင်ပုလေး တွေက ပို ပြီး လှလို. ၊၊ မလေး ကြိုက်တဲ့ ခရေပန်းလေး တွေတောင် ဝေတပွင်. ကြွေတလွင်.နဲ. ၊၊
စီမံကိန်းတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုပြီးလို. နေရာတွေ တစ်နိုင်ငံလုံး နှံ.နေပေမယ်. ကျောင်းမြေကို တော. ပုံမှန် လာ မိနေတုန်းပဲ ၊၊ ရောက်တိုင်းလည်းမလေးကိုလွမ်း နေဆဲပဲ ၊၊ မလေး တစ်ယောက် အဆင်ပြေတယ် ဆိုတာ ကြား တော. ရင်ထဲမှာ ၀မ်းသာ ပီတိ တွေ ဝေနေဆဲ ပဲ ၊၊ သြော် ဘာမှ မကြာဘူးထင် ရပေမယ်. အခု ဆိုရင် မလေး ရဲ့ သားသမီးတွေ တောင် အတန်းတွေ အတော် ရောက် နေရော.ပေါ့၊၊ မောင်မိုးဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် က တော့ ကျောင်းဖက်ကို ရောက်တဲ့ အခါတိုင်း ကြွေပေမယ်. လန်းနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ခရေပန်း လေးတွေ ကို ကောက် လို. သီနေဆဲပေါ. လေ ............
အဆင်သင်.ရင်ဖြင်. တခါတစ်ခေါက်လောက်တော. လာရောက်လို. နှူတ်ဆက်လိုက် ချင် စမ်းပါ ရဲ့............
" မဟုတ်သေးဘူး လေးကြည်ဖြူ ........... နင်ထွက်သွားမယ်. လမ်းမှာ ငါဟာ ဆူးညှောင်ခလုတ်တစ်ခု မဖြစ်စေ ရပါဘူး ......... နင်သွားချင်ရာသွားဖို. ခင်းပေးထားမယ်. ခြေနင်းပျဉ် ပါးပါးလေးရယ် ပါ ........... "
ကြည်ဖြူရေ ....... နင်ဘယ်ဆီမှာများ ရောက်နေမလဲနော် ၊ နင်ရှိနေမယ်. အရပ်ကို မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း ကောင်းသားလား ခုများတော. နင်န.ဲငါန.ဲ ဘ၀ က နီးလျက်နဲ.ဝေး ၊ ကျွမ်းလျက်နဲ.ဆွေးနေရပါလားနော် .....
ငါလေ ဒီနေရာကို ပြန်ရောက်တိုင်း ၊ ရင်ထဲမှာ မချိအောင်ခံစားရတာ ကိုယ်တိုင်သာ သိပါတယ် ၊၊ မလာပဲလည်း မနေနိုင် တာလည်း တာဆီးလို.မရတဲ့ နင်ကို ချစ်နေဆဲ ငါ့ရဲ အလွမ်းတွေ ကြောင်.ပေါ့ ၊၊ နင်ရဲ. သတင်းကောင်း တွေကြားရတိုင်း ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပေမယ့် ၊ လွမ်းတဲ.စိတ်နဲ. မချိအောင်နာ တဲ့ ရင် နှစ်ခြမ်းက အလွမ်းတွေက ဗြမ်းဗြမ်းကွဲရော.ပေါ့ ၊၊
နင်က ငါ.ကိုမှာသတဲ့လေ " ပြုစု ပျိုးထောင်ခဲတဲ့ နင်.ရဲ.ကျေးဇူးတွေနဲ. ရရှိလာခဲ့တဲ့ အသိးအပွင်.တွေကို အခြား နင်မဟုတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ပေးဆပ်နေရတာ ငါ ရင်အနာဆုံးပါတဲ့ " သြော် ခုချိန်ထိ ငါရင် နာ အောင် စကားတွေတက်နေဆဲပါလား မရွှေစာ ၊၊ နင်ရယ် ငါရယ် အတူရှိနေတဲ့ အချိန်လေးမှာ နင်စိတ် ချမ်းသာ တာကို မြင်ရရင် ကျေနပ်နေတဲ့ ငါက နင်လိုတာကို လုပ်ပေးဖို. ဆန္ဒ ဆိုတာက လွဲရင် ငါ.ရင်ထဲမှာ ဗလာပါ လေးကြည်ြ့ဖူ ရယ် ၊၊
" ငါရှိရာကို မလာနိုင်တဲ့ သူဟာ ငါ.ကို စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူးလား တိုးမောင် " လို.နင်က တိုးမောင်ကို မေးတယ်လို . ငါ.ကို ပြန်ပြောပြတယ် ၊၊ သြော်မာနတွေ တံခွန်ထူလို. ၊ အောင်လံတွေ တလူလူ လွင်.နေဆဲ ပါလားရယ်လို. တွေးမိသေးတယ် မလေးရယ် ၊၊ ငါလေ နင်.ကို အသည်းနင်.အောင် ချစ်တယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. နင်.ကို ရင်နာအောင်လည်း မုန်းတယ်သိလား ..........
နင်ရဲ့ အဆင်ခြင်တရားကင်းတဲံ့ စကားလုံးတွေ အောက်မှာ ငါရဲ့. သိက္ခာတရားတွေ ဘာမှကုန်းကောက် စရာမ ရှိတော.ဘူး ၊၊ ဒါပေမယ်. ချစ်နေဆဲပါ မလေးရယ် ၊၊ နင်ကို ချစ်တဲ့ အချစ်တွေက ဘာနဲတူလဲဆိုတော. ကန်တက် ကျောက်တက်တဲ့ ကလေးလေးကို ချစ်ရသလို ၊၊ ဆဲတက်ကာစ ကလေးသေးသေးလေးကို ချစ်ရသလို ၊၊ ဘာတွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ငါနင့်အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတွေ မပြောင်းလဲသေးတာ ငါ့ ဘာသာ အသိဆုံး ပါလေ၊၊
ဒီနေ.လေ ဘာကြောင့် မှန်းမသိဘူး နင်နဲ.ငါ အတူ အမြဲရှိနေခဲ့တဲ့ ပိတောက်ပင်ကြီး နားမှာ လာထိုင်နေမိတယ် ၊၊ အမေကတော. ငိုတယ်ကြည်ဖြူရယ် ၊၊ ထုံးစံအတိုင်း သူက ငါ နင်.ကို သတိယနေတယ် ထင်တိုင်းပေါ. ၊၊ ငါပြောပါတယ် ဟာ အားလုံး ဟာကံတရားပါလို. ၊၊ အမေ့ သား သူ.ကို သတိယနေတာမဟုတ်ဘူး ၊ သားရဲ့ဘ၀ ကို သားလွမ်း နေတာ ပါလို. ၊၊ သူသာ တကယ် ချစ်ရင် သားရဲ့ အပြစ် တွေက သူ.ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ အောက်မှာ အပြစ်ကင်း ပျောက်သွား မှာပေါ. လို. ၊၊ ငါ့မေက ရိုးသားပြီး ချစ်စရာကောင်းပါ တယ် ကြည်ဖြူရယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. နင် လိုချင်တဲ့ ဂုဏ် သရေ ရှိတဲ့ ပညာတက် မိန်းမကြီးတော. မဟုတ်ဘူးနော် ၊၊
အဲဒီနှစ်က ငါ အတွက်ကံကြမ္မာဆိုး ၀င်တဲ့နှစ်ပဲ ၊၊ ငါတို.မိသားစု မှာ ငါဟာ သားကြီးတစ်ယောက် ၊၊ အငယ်တွေ ရှေ.ရေးကို အမေအိုကြီး တစ်ယောက်တည်း နဲ့. ငါ ဘယ်လိုထားခဲ့ရက်ပါ.မလဲ ၊၊ နင်ပြန်လာပြီး ငါ.ကိုခေါ်တော. အမေက ဘာမှမပြောဘူး ၊၊ သားသဘောပါတဲ့ ၊၊ ဒါပေမယ်.လေ အမေ ရယ် အဲဒီညက ငိုလိုက်တာ ဟယ် တည လုံး ပဲ ၊၊ငါပြန်မလာဘူး ထင်လို. ၊၊ ငါရှိနေတာကို အမေမသိဘူး ၊၊နောက် အငယ်တွေကို ပြောနေတာ ကြားတော့ ငါ.ရင်ထဲမှာ နင်.သွားတာပဲ ၊၊
" မင်းတို. အကိုကြီးက အမေတို.နဲ့ ဝေး ရာ ဟိုးအဝေးကြီးကို ထွက်သွားတော.မှာ ၊ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဘာမှ စိတ်ဆင်း ရဲစရာတွေ မပြောနဲ့နော် ၊ အမေ.သား စိတ်မဖြောင်.မှာ စိုးလို.တဲ့လေ "
ငါလေ မုန်းလိုက်တာ ၊ ငါကိုယ်.ငါပေါ .၊၊ နင်ကိုတော. အပြစ်မမြင်ရက်ပါဘူး မလေးရယ် ၊၊ နင်က ငါတို. ဘ၀တွေကိုမှ မသိဘဲကိုး ၊၊ နင်ဖြတ်သန်းခဲ့ ရတဲ့နင့်ဘ၀က အဆင်ပြေတဲ့ အခြေတင့်တဲ့ ဘ၀ကိုး၊၊ ငါ.အမေ သနားစရာပါ မလေးရယ် ၊၊ နင်.ကို ငါဘယ်တုန်းကမှ မပြော ဘူးတဲ့ အကြောင်းလေးပေါ .၊၊ နင်မှတ်မိမလား ၊၊ ငါကို.ကားမောင်းတက်လားမေးတော. လေ၊၊ အမေ.ကို ပြန်ပြောပြတော . အမေက သားရယ် ဟုတ်သား ပဲ ငါ.သားက ကားမောင်းတက်ရမှာပေါ့ ၊ သွားပြီးသင်တန်းတက်နော် ဆိုပြီး သူရဲ့ နားကပ်လေးကို ငါမသိအောင် ပေါင် ပြီးပေးရှာတယ်လေ ၊၊ သူသိပ်မြတ်နိုးရှာတဲ့ တစ်ရံတည်းသော မြနားကပ်လေး ၊၊ ငါ.အမေဟာ နင်ကို သိပ် ချစ်သလို လေးစားနေဆဲပါ မလေးရယ် ၊၊
ဟိုတစ်နေ.က နင်တို.အိမ်က နင်တို.ရဲ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာ လေး လာ ပို.သွား တယ်လေ၊၊ နင်.အမေ ကိုယ်တိုင် လေးလေး စားစား လာ ဖိတ်သွား တာ ပါ ၊၊ ပြောသွားပါ သေးတယ် ၊ မောင် မိုးရော ဘယ်တော. ယူမလဲ တဲ့ ၊၊ အခု လေးကြည်ဖြူ ကောင်လေး က လေးကြည်ဖြူကို အရမ်းချစ်သလို ၊ ပညာတက် ၊ ငွေရှာလည်းကောင်း ပါသတဲ့လေ၊၊ အမေက ၀မ်းသာ လို. နင်အတွက်လေ၊၊ နောက်ငါ.ကို ပြောသေးတယ် ၊၊ အလေး အတွက် ဂုဏ် ယူလိုက်ပါ သားရယ်တဲ့လေ၊၊ အမေတို.နဲ့သာ ရရင် ၊ ငါ.သားနဲ့သာဆို ဒီလောက် အဆင်ပြေမှာမဟုတ် ဘူးတဲ့လေ၊၊ မျက် ရည် စတွေ ဝေလို.ပေါ. ၊၊
အခုတော. နင်လည်း နင်.ဘ၀နဲ.နင် အခြေကျနေပြီ ဆိုတော. ၊၊ ငါဟိုတစ်နေ. က ကျောင်းကို ကြုံလို. ၀င် ခဲ့သေး တယ် ၊၊ နင်အရမ်းသဘောကျ တဲ. လက်ပံပင်ကြီးလည်း ဒီအတိုင်းပေါ. ၊၊ လက်ပံပွင်.တွေ လည်း ဝေ လို.ကွယ် ၊၊ ကျောင်းရှေ. က မလေးရှား ပိတောက်တွေ က ပွင့် နေလိုက်တာ မလေးရယ် ၊၊ ငါတို.နောက်ဆုံး ကျောင်းကြီး မှာ ဆုံဖြစ်တဲ့ နေ.က အတိုင်း ပဲ၊၊ နင်မင်္ဂလာဆောင် အတွက်များ ဂုဏ်ပြုကြလေ သလားလို. ၊၊
နင်ရယ် ငါရယ် အတူတူစိုက် ခဲ့ဘူးတဲ့ စွယ်တော် ပင်လေးက ထူးထူုး ခြား အပွင်လေးနှစ်ပွင်.တည်း ၊၊ တစ်ပွင်. က အဖြူ ၊ တစ်ပွင်.က ခရမ်းရောင်လေး ၊၊ အပင်လေးကို ခြံစည်းရိုးလေး ခတ်ပြီး စာလေးရေးထားတာက ဘယ်မဆုံပန်းတဲ့ ၊၊ ဘယ်သူကများ နာမည်ပေးထားပါလိမ်.နော် ၊၊ တို.များစိုက်ခဲ့ တယ်ဆိုတာာ သူတို.မှ မသိဘဲလေ ၊၊ နောက် ထူးထူး ခြားခြား အပင်တမျိုး တည်းက အရောင် နှစ်မျိုးနဲ့ ပန်းတွေပွင်.နေတာ ကိုး ၊၊
ဒီ ဘယ်မဆုံ ပန်းပင်လေးကို မောင်မိုး နဲ. လေးကြည်ဖြူ ဆိုတဲ့. ဘယ်တော.မှ မဆုံနိုင်တဲ့ ချစ်သူ နှစ်ဦး စိုက်ပျိုး ခဲ့ဘူးတယ် ဆိုတာတော. တိုများရဲ. ဘေးက လက်ခုပ်ပင်ကြီး လည်းသိမှာပဲ ၊၊ တို.များလျှောက်နေကြ ဘွဲနှင်းသ ဘင်လမ်းကြီး လည်းသိမှာပဲ ၊၊ နောက် စာသင်ဆောင်ဖြူဖြူ ကြီးတွေလည်း သိနေမှာပဲနော် ၊၊
နောက်တစ်ခေါက် ကျောင်းကြီးကို ပြန်လာဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်မဆုံ ပန်းပင်လေးရယ် ၊ အဲဒီအပင်နား မှာနင်.ကို နေ.တိုင်းလွမ်းနေရှာတဲ့ မောင်မိုးဆိုတဲ့ ငါ.ဆီရယ်ကို တစ်ခေါက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် လာကြည်.ခဲ့ပါလား လေးကြည်ဖြူ ..
နင်.ကို အလွမ်းပြေ ကြည်.ရုံလေးသက်သက်ရယ် ပါ .........................
ပြီးတော. နင် မယုံတဲ့ ဘယ်မဆုံပန်း လေးလည်း ပြချင်ရုံပါ ဟယ်..................
New Year is the Time for people to cleanse themselves of the defilement , they might have collected during the year and look forward toabetter life
Wishing You and Your Family Good Health and Good Wealth in very Happy at Myanmar New Year 1371
Good Health , Happiness , Prosperity and other Good Things .
Let me share Mandalay Thingyan Photos
I just receive from one of my fris .
Pls visit to this link ညီမင်းစံ
I informed and requested to Blog owner to share all of my fris ........
Photos of Mandalay Thingyan .
So Nice Photos................
ToPaYoh ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဘုရားဆောင်
သီလယူပြီး စတုဒီသာ တိုးဖို. ပြေးကြတာ
မြန်မာတွေပျော်တဲ့ပွဲက သင်္ကြန်ပွဲပါ ၊၊ သင်္ကြန်သံကြားရင် ရင်တုန်သလို ၊ ရင်ခုန်သလို ၊၊ December ကျော်လောက်ကတည်း က သင်္ကြင်္န်သံတွေကြားနေရပြီ ၊၊ မြန်မာပြည်ကို ပိုလွမ်းမိပါသည်ပေါ့ ၊၊ သင်္ကြန်ကို တူတူ ရင်ခုန်ရအောင် ဓါတ်ပုံလေးတွေ ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ၊၊ အမှတ်တယပေါ့ ၊၊ ကျွန်တော်အတွက် ဓါတ်ပုံတွေ အလကားရိုက်ပေး တဲ. Nicolas ၊ Jerry ၊ Richard နှင်. ကို ဒီပတို.ကို ကျေးဇူးပါ ၊၊ ကိုယ်တိုင်တော့ မရိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး (အချိန်မရလို.ပါ ၊ ဟုတ်ပါဘူး Camera မရှိလို.ပါ ) ၊၊ ကိုယ်.ပုံတော. ချစ်တီးနဲ. ကိုဒီပ ရိုက်ပေးလို. ရခဲ့သေးတယ် ၊၊ နောက်ဆို လာ မကြည်.မှာစိုးလို. ကိုယ်.ပုံတော. တင်ပေးတော.ပါ ဘူးဗျာ ၊၊ ( ကြည်.ချင်သူများ Email မှတဆင်. တောင်းယူနိုင်ပါသည် ၊ သင်္ကြန်တွင်း အထူး Discount ပါ .... kwi kwi ..... )
စာတော.ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်း ကိုဒီပဆီကပဲ ကြည်.လိုက်ပါတော.၊၊ ကျွန်တော်တောင် ကွင်းနာမည် တွေဘာတွေ သူ.စာ ဖတ်ပြီးမှ သိတာ ၊၊ ဟီဟိ ၊၊ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး ဒီတမနက်လုံး ဓါတ် ပုံ တင်တာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး ၊၊ စာလည်းရိုက်ချင်တော.ဘူး ၊၊ အခုပဲ ၂ နာရီထိုးပြီ ၊၊ မနက် ၉ နာရီထဲက စတာ ဘယ်လိုမှ လုပ် ရဘူး၊၊ တင်လိုက် ပြုတ်လိုက် စာ ရိုက်လို.မရလိုိက်နဲ. ၊၊ ပုံစာလေးတွေလည်း ရိုက်ပေးချင်တာ ၊၊ ရှင်ဖုန်း ပုံတွေလည်း ပျောက်ကုန်တယ် တင်ပြီးမှ ၊၊
ToPaYoh ကျောင်း စတုဒီသာ ပျော်ရွှင်စရာ
ရွှေတို.ဆုံ ရာ City Hall က Peninsula Plaza စည်းကမ်းရှိတဲ့ရွှေမြန်မာ ၊ စတိတ်ရှိုးဝင်ဖို. တန်းစီကာ ( စိတ်မကောင်းစရာ ၊ ကိုရွှေရဲကို အဖြူထည်ကြီးပြသနာရှာတဲ့ ညီအစ်ကိုများ လည်း တွေ.ရတာ )
မိဘအတွက် ၊ မိသားစု အတွက် ကြိုးစားကြပါလို.ဆိုရှာတဲ့ ဦးဇော်ဝမ်း ( ကျေးဇူးပါ ) ကိုဥက္ကာ ဘာတွေများ See နေတာတုန်းဗျာ ၊၊ လက်မှတ်တွေ ကံစမ်းမဲ ဖောက်တော. နံပါတ် တစ်သောင်း ကျော်တယ် လို. သူ ငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောပါတယ် ၊၊ ပျော်စရာ ပါ ၊၊ အလွမ်းတွေ ပြေပါတယ် ၊၊ ရေအများကြီး မလောင်းရလို. မကျေနပ်တဲ့ သူလည်း ရှိပါတယ် ၊၊ ဒါပေ မယ်. ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီလောက်ဆိုလည်း တော်ပါပြီလေ နော်..............
၀တ်စုံတွေ အများကြီး လဲတဲ. Presenter မမ ကလည်း တကယ်တော်တာ ၊ မင်းသမီးတောင် ရှုံးတယ်ဗျာ..စတာနော် အစ်မဘယ်သူလဲသိဘူး ဟိဟိ
လာခါနီးမှ မီးမလာလို. CD မခုတ်ခဲ့ရ ပါဆိုတဲ့ ကို မျိုးကျော.မြိုင်တစ်ယောက် အသက် ၂၀ကျော်နဲ. ရည်စား ၃ ယောက်ပါတဲ့ ၊၊ ဒိုင်ရှိုကတော. အများကြီးပေါ့ ... ဒါကို လူတိုင်းသိပါတယ် တဲ့ ဟာဟ တော် လိုက်တဲ့သူ ဘယ်လိုများဒိုင်လျှိုထားပါလိမ်..............
မြင်ကွင်းက ပျော်ရွှင်စရာ ၊ လူတွေများ ထင်မှတ်စရာတောင်မရှိပါ ၊၊ ဘောလုံးတစ်ကွင်းလုံး ပြည်.ရှံကာ ၊၊ သင်္ကြန်အလွမ်းဖြေကြတာ ၊၊
မရှင်ဖုန်းလည်း ပျော်ရွှင်စွာ ၊ တယ်လီဖုန်းကို အပြစ်တင်နေဆဲပါ ( ကျွန်တော်တို.လည်း မကျေနပ်ပါ ဖုန်းခတွေ မတရားကျလို. တစ်လတစ်လ )
ဖြူဖြူက လိမ္မာရင် မြန်မာပြည် ပြန်ခေါ်သွားမယ် ဆိုတော. လိုက်ချင်ဘူး လိုက်ချင်ဘူးတဲ့ အားလုံးက
ရဲလေးကတော. ထခုန်တဲ့ ၊
ကိုစည်သူက လွမ်းရယ်မပြေ တဲ့ကျောင်းကြီကို ပြန်ခေါ်သွားသေးရဲ့ ...........
ရေမှန်မီးမှန်ရင် ပြန်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့ ၊ အားလုံးဟာဘ၀သမားတွေပါ လို. ပြောတဲ့ ကို ဆောင်းဦးက မြန်မာဟေ့ မြန်မာတဲ. ပြီးတော.
အားမငယ်ကြပါနဲ.တဲ့............. သူပြောသွားတာ ...
ဒီလိုနဲ. စင်ကာပူမြေကို ခြေချလို. အပူတပြင်းလှမ်းခဲ့ရတဲ့ နေရက်တွေက တသက်မမေ့စရာပ ၊၊ အများသူငါ သူငယ်ချင်း Pioneers များလို ခက်ခက်ခဲခဲ မသွားရပေသည်. ပင်ပင်ပန်ပန်းတော့ လှမ်းခဲ့ရတာပ ၊၊ သူတို.များ ရဲ. အားပေးထောက်ပံ့ ကူညီ ဖေးကူမှူမျိုးနဲ. လွယ်ကူခဲ့ရတယ်လို. အမြဲပဲ အောက်မေ့ ဆင်ခြင်မိပါတယ် ၊၊ ရောက်လာတာက နိုဝင်ဘာ ၊ ဒီဇင်ဘာမို. အလုပ်က နည်းနည်းတော. ပါးစပြုပါပြီ ၊၊ စင်ကာပူထုံးစံ နှစ်ကုန် အပို ဆောင်းဆုလေးအတွက် ၊ အားလုံးကစောင်.စားနေရတော. ဘယ်သူမှ အလုပ် မထွက် ကြတဲ့ အတွက် အလုပ်သစ်ရှာ သူတွေအတွက် တော်တော်လေး ခက်ခဲတဲ့ ကာလပေါ. ၊၊
ဒါပေသည်. အင်တာဗျုးလေး တွေတော. အထိုက်အသင့် ရခဲ့ပါသည် ၊၊ တနင်္ဂနွေနေ. ရောက်ပြီးတနင်္လာနေ. နေ.လည်မှာ အင်တာဗျုးစသွား ရပါတယ် ၊၊ နေ.လည် ၂ နာရီလားမှတ်ပါတယ် ၊၊ နေရာတော. မေ့သွားပါပြီ ၊၊ ဘာ.ကြောင်.လည်းဆိုတော. အလုပ်ကအဆင်မပြေခဲံ့ဘူးလေ ၊၊ အဲဒီအင်တာဗျုးမှာ စတွေတာပါ ၊၊ သူကို.ပြေ ပြ ချင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရင်ထဲမှာ အပြည်.ပေါ. ၊၊ ဘယ်လိုအလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့တယ် ၊၊ ဘယ်တွေမှာ လုပ်ခဲ့တယ် ၊၊ လုပ်သက်ဘယ်လောက် ရှိပါပြီ ၊၊ စသည်ဖြင်.ပေါ့လေ ၊၊ သို.သော် စိတ်မကောင်းစရာ ကောင်းတာက ကိုယ်ကို. ကိုယ်တောင် သေချာ မိတ်ဆက်မပေးတက်တဲ့ ဘ၀ ၊၊ မှတ်မှတ်ယယ အင်္ဂလ်ိပ် လို လုံးဝပြောရတဲ့ အစပါ ၊၊
မြန်မာပြည်မှာ တစ်ခါ အင်တာဗျုးဝင်ဘူးပါတယ် ၊၊ ဂျာမဏီသံရုံး မှာ ၊၊ ဌာနက တဆင်. သွားဖြေရတာ ၊ အခြား လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေလည်းပါ ပါတယ် ၊၊ သံအမတ်ကြီးဆိုသူ (နှာခေါင်းရှည် ရှည် လူကြီးနဲ.တွေ.ရတာ ) ပေါဗျာ၊၊ သဘောကောင်းတယ်ဗျ ၊၊ ပြောလိုက်ရတာ ၁ နာရီလောက်ကြာမယ်ထင်ပ ၊၊ ဒါပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်လို မြန်မာပြည်မှာ ပြောဘူးခြင်းပါ ၊၊ အင်္ဂလိပ်ကောင်းတာ တော. ပြောမနေနဲ.တော. ၊၊ ဒီလိုဒီလို ၊၊ အဲတော. ဒီမှာ အင်တာဗျုးလည်းဝင် ရော စတွေ.တာပေါ. တရုတ်ကြီးနဲ. ၊၊ ဒီလိုနဲ. ဒီလိုနဲ.ပေါ.ဗျာ ၊၊ အဓိက ပြောချင်တာက တော. အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်း ခြင်းနှင် အင်တာ ဗျုး အကြောင်းပါ ၊၊ ကြွားတာပါ ကြုံလို. ၊၊
အဲဒီလိုနဲ. ရလာတဲ့ အင်တာဗျုးလေးတွေသွား ဖြေရင်း အလုပ်ရလာတာပေါ့ဗျာ ၊၊ အဓိက တင်ပြချင် တာကတော. ကျွန်တော်တို. ကျင်.သုံးခဲတဲ့ နည်းစနစ်လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ ၊၊ ကျွန်တော်တော. ဘယ်တော.မှ မေ့မှာ မဟုတ်သလို ၊ အကြံလည်းပေးမိပါတယ် ၊၊ သိုသော် သို.သော် ........ ၊၊ ကျွန်တော. သူငယ်ချင်းတစ် ယောက်က ကျွန်တော်. အရင် ရှေ တစ်ပတ်မှာ ရောက်တာဗျ ၊၊ အမှန်တိုင်းပြောရရင် အဲဒီသူငယ်ချင်းက တဖွဲ. တည်း တွဲခဲ့တဲ့ သုငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး ၊၊ အတန်းတူ သူငယ်ချင်းပါ ၊၊ အစအနောက်လည်း သန်တော. သတိထားပေါင်းရတဲ့သူငယ် ချင်းပေါ့ ( သူငယ်ချင်းရေ စတာနော် ၊ မင်းပြန်စမှာ ကြောက်လို.ပါ )
ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ အချိ်န်မှာ သူလည်းအင်တာဗျုးမရသေးဘူး ၊၊ ကျွန်တော်နဲ.မှ အတူတူ အင်တာဗျုးရတာပါ ၊၊ သူလည်းရ ကိုယ်လည်းရပေါ. ၊၊ ဒါပေမယ်. ကုမ္မဏီက မတူဘူး ၊၊ ကျွန်တော်တို. ဘယ်လို လုပ်လိုက်လည်း ဆိုတော့ တူတူသွားမယ် ၊၊ မေးမယ်ပေါ. ရရင် ၂ ယောက်တူတူ ဗျုးမယ် ဆိုပြီတော. ၊၊ နောက် အဲဒီလို လည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ် ၊၊ တကယ်လည်း တူတူ သွားတယ် ၊၊ HR မှာ ၀င်မေးတယ် ၊၊ ကျွန်တော်. သူငယ်ချင်းလည် အတူတူပဲ အင်တာဗျုးဝင်လို. ရမလားဆိုပြီးတော. ၊၊ တချို.လည်း လက်ခံတယ် ၊၊ တချို.လည်း အဆင်မပြေဘူးပေါ့ ၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်တာဗျုးဝင် ခွင်.ရတာဟာ ကျွန်တော်တို. အတွက် ၅၀ % သေချာ တာပဲ မဟုတ်လားဗျာ ၊၊ တကယ် ကို ဒီလိုလုပ်ပြီး အလုပ်ရှာ ခဲ့တာပါ ၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် တို. တကယ်ကို ဖေးမကူညီခဲ့ကြပါတယ် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ၊၊
နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တော. ပြောင်းပြန်ပါ ၊၊ မြန်မာပြည် မှာတုန်းကတော. အတူတူ အလုပ်ရှာရ အောင် ၊ ဖေးမကူညီကြတာပေါ့ ၊၊ အမြဲပြောနေတက်တာပါ ၊၊ ဒါပေမယ်. ဒီကိုရောက် တော. အိတ်မဖောင်းပဲ စိတ်တွေ ပြောင်ပြီး မပြောနိုင်မဆိုနိုင်ပေါ့ဗျာ ၊၊ ဖြစ်ချင်တော. အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သွားဆုံပါသေးတယ် ၊၊ ကျွန်တော်. ရဲ့ အခြားသူငယ်ချင်းဆို အင်မတန်မှ အမြင်ကတ်ပါတယ် ၊၊ အဲဒီသွားဆုံတဲ. အင်တာဗျုးမှာ ဖြစ်ချင်တော. ကျွန်တော် တို. Offer ရခဲ့ပေမယ်. သူကတော.အဆင်မပြေခဲ့ ဘူးကြားရတယ် ၊၊
ကျွန်တော်တို. အလုပ်ရသွားထဲ့အထိ အဲဒီသူငယ်ချင်း အဆင်မပြေရှာပါဘူး ၊၊ နောက်အတော်ကြာမှ အဆင်ပြွေသွားပါတယ်၊၊ ကြုံခဲ့ဘူးတာလေးပေါ.နော် ၊၊
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဘယ်လိုလဲဆိုတော . အင်တာဗျုးတစ်ခုမှာ တူတူသွား ဆုံ ရပါတယ် ၊၊ သူဌေးလုပ်သူကကျွန်တော် တို.ကို ပုံမှန်ထက် ဈေးချပြီးလုပ်ခိုင်းပါ တယ် ၊၊ ကျွန်တော်တို.က နှစ်ယောက်ဆိုတော. တိုင်ပင်လို.ရတယ် ၊၊ နောက် သူငယ် ချင်းတွေကို လှမ်းမေးလို.ရပါတယ် ၊၊ ဥပမာ ကိုယ် က ၃ ယောက် သူက ၃ ယောက်ဆို ကျွန်တော်တို. လူ ၆ ယောက်ရဲ့ အကြံဥာဏ်ကို ရပါတယ် ၊၊ စဉ်းစားလို. ရတာပေါ. ၊၊ အဲဒီသူငယ် ချင်း တစ်ယောက်က ကျောင်းမတူပါဘူး ၊၊ တက္ကသိုလ်တော.တူတာပေါ့လေ ၊၊ သူကတော.မြိုးကြီးကျောင်းကပေါ့ လေ ၊၊ သူက လာပြောပါတယ်၊ ဈေးချပြီးလုပ်ခိုင်းတာ လက်မခံဖို. ၊၊ မြန်မာတွေ ဈေးမဖျက်ဖို. ၊၊ သူကလာပြောတာနော်၊ သူက အရင်ရောက်နေတာ ၊၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို. လက်မခံဖို. ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ ၊၊ နောက်အင်တာဗျုးတွေလည်း ရပြီးသားပါ ၊၊ ကိုယ်တွေကတော. သူတို.ိုမြိုကြီးသားတွေလို အပြောမတက်တော.အင်းပါပေါ. ၊၊ ကျွန်တော်တို.လက်မခံဘူး နောက်လည်းရပြီးနေပါပြီပေါ့၊၊
နောက်ဖြစ်ချင်တော. အိမ်မှာ တူတူနေတဲ့ အစ်ကိုကြီးက အဲဒိကုမ္မဏီကနေ Resign တင်ထားတဲ့အချိန် ၊၊ သူပြောပြလို. ကိုယ် ကအကြောင်း သိတော. မကောင်းတဲ့အကြောင်း ပြောပြမယ်ပေါ့ ဆိုပြီး ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ဖုန်းဆက်တော. ၊၊ ခုနက တရားတွေ ဟောသွားတဲ့ မြိုကျောင်းသားကြီးက လက်ခံထားတယ် ၊၊ ပေးထားတဲ့ လျော.ဈေးနဲ. ၊၊ လူတွေသဘာဝ ရယ်ချင်မိပါရဲ့ ၊၊ အဲဒီလူကို ဒီနေ.ထိလည်း မှတ်မိနေသေးတယ် ၊၊ နာမည် ရယ် ၊ မေဂျာရယ် ၊၊ ကျောင်းရယ် ၊၊ လူတော. ပြောပြမှ မှတ်မိမှာပါ ၊၊ ခုဒီစာကို ဖတ်နေမယ်. သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ. နော် ၊၊ သူ.မှာလည်း သူ.အခက်အခဲတော.ရှိမှာပါလို. တွေးပြီးဖြေပါတယ် ၊၊ ဘာလဲမသိဘူးဆိုပြီး ရီချင်တာပါ ၊၊ လူတွေ ဟာ တကယ် အရေးကြုံလာ မှ အကြောင်းသိရတာပါ ၊၊
ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက ကျွန်တော် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ နည်းလေးကို ကျွန်တော်တို.တော. သဘောကျပါတယ် ၊၊ ပိုကောင်းတယ်လို.လည်း ထင်ပါတယ် ၊၊ တစ်နှစ်ပြည်.တဲ.နေ.တုန်းက မှတ်မှတ်ယယ လေး လာတုန်းက ကူညီထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီကို ကျေးဇူးတင် အမှတ်ယနေကြောင်း Message လေးပို.လိုက် ပါတယ် ၊၊ အားလုံးက ပြန်ပို.ပါတယ် ၊၊ အဆင်ပြေပါစေတို. ၊ အချိန်ကုန်တာ မြန်လိုက်တာတို. ၊ ဒါဟာ ဘ၀ အစပဲ ရှိသေးတယ် တို. ၊ ဒါဟာဘ၀နဲ.ယှဉ်ရင် သေးသေးလေးပါတို. ( ကျေးဇူးရှင်ပြန်ပို.တာပါ ) စသည်ဖြင်.ပေါ.လေ ၊၊ အဲဒီသူငယ်ချင်း ပြန်ပို.တဲ့ Message လေးကို အခုထိသိမ်းထား မိသေးတယ် ၊၊ သူက ဘယ်လိုပြန်ပို.လဲဆိုတော့ " Ialso Thank You So Much . We have to go ahead . So we can remember and thank each other . I always remember our begining time in sg . I distributed other people to looking for job like you and me . But they could not do .So our understanding very high . Thank again fri . Everything is Good Luck for you "
ဒါကြောင့် ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဝေ မျှတာပါ ၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတူတူ သာ တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်ကြရင် ပျော်စရာ ကြီးပါ ၊၊ ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းလည်း ကြည်နူးရပါတယ်၊၊ အခုချိန်ထိလည်း ကျွန်တော်တို. ကိစရှိရင် တိုင်ပင်အကြံပေးနေဆဲ ၊၊ ဒါပေမယ်. ကျွန်တော်တို.မတွေ.ဖြစ်တာ ကြာပေါ. ၊၊ ဖုန်းနဲ.ပဲတွေ.ဖြစ်ကြတာပါ ၊၊ သူရဲ. သတင်းကောင်းတွေ ကို ဝေမျှတိုင်း မုဒိတာ ပွားနေရဆဲ ၊၊ ကျွန်တော်.အတွက်လည်း ဖေးမကူညီနေ ဆဲပါ ၊၊ (မနာလိုတာ တစ်ခုတော.ရှိရဲ. မကြာခင် အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်တဲ့ ၊ နောက်တာပါ ) ၊၊ ဒီလိုသူငယ်ချင်း မျိုးနဲ. ဘ၀တစ်ကွေ.မှာ ဆုံတွေ.ခဲ့ရတာ ဟာ အဆိုးတွေထဲက အကောင်းလေးတစ်ခုပေါ.ဗျာ ၊ ကျွန်တော်.အတွက်တော့ ၊၊
(ဓါတ်ပုံလေးသုံးခွင်.ပေးတဲ့ Jerry ကို ကျေးဇူးပါ ၊ Topayoh ဘုန်းကြီးကျောင်းက နေ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ )
နှစ်သစ်မှာ အားလုံးပျော်ရွှင် ကြပါစေ လို. ဆုမွန်ကောင်း တောင်း လိုက်ပါတယ် ဗျာ ၊၊
ရိုးသားစွာ ရင်ခုန်နေကြသော သူငယ်ချင်းအပေါင်းးအသင်း ရောင်ရင်း များနဲ. ရင်ခုန်သံချင်း ညှိနှိုင်း ရင်း နဲ. ချီတက်လာတာ အခုဆိုရင် ကျုပ်ရဲ. Blog လေးက ၁ လ သားလေး ကျော်ခဲပြီပေါ.ဗျာ ၊၊ စာတွေလာဖတ်တဲ. မိတ်ဆွေတွေကို တွေ.ရင် ၀မ်းသာ မိ ပါတယ် ၊၊ Comment လေးတွေ ကို တေ.ွမိရင် ပျော်မိပါတယ် ၊၊ စာတိုစာရှည် Email တွေ ရတဲ. အခါ ကြည်နူးမိပါတယ် ၊၊ ရိုးသားစွာ ရင်ခုန်မိတာလေးကို တင်ပြ မျှဝေတာပါ ၊၊ ကျန်တဲ. အပေါင်းအသင်း ရောင်းရင်းများလည်း ထိုနည်းနှင်နှင် ခံစားရမိ လိမ်.မယ် လို. ယုံ ကြည် မိပါတယ် ၊၊ ဒီလိုနဲ. ဒီလိုနဲ.ပေါ.ဗျာ ၊၊
မနေ.ညကမှ စာရေးသက် အတော် ရနေပြီဖြစ်တဲ. သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရဲ. Blog လေးကို ၀င်ဖတ်ရင်းနဲ. သူရဲ. မိတ်ဆွေ ၀ါရင်. Blogger (Blog ရေးသက်ကြာ နေပြီ မို. လေးစားစွာ သုံးလိုက်ပါတယ် ) တစ်ယောက်ရဲ. Comment လေးကို ဖတ်မိရင်း ဒီ Post လေးကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ ၊၊ သူလည်းရိုးသား စွာ ရေးမိတယ် လို. ယုံကြည်ပါတယ် ၊၊
“အခုတစ်လောဘလော့တွေသိတ်များတယ။် ဖောင်းပွလာတယ်လို့တောင်ခံစားရတယ။် အဆင့်မှီစေဘို့ဘာပေတံ့နဲ့တိုင်းမလဲ။ တိုင်းစရာမရှိဘူး။ ဆယ်တန်းအောင် မှ တက္ကသိုလ်တက်ရမယ်လို့ကန့်သတ်ချက်ရှိပေမဲ့ ဘလော့ရေးဘို့ဘာ ကွာလလီဖီကေးရှင်း ရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူး။အင်တာနက် တစ်ခုရှိရင်ရပြီ။ မြန်မာဖောင့်ကောင်းကောင်း မရိုက်ချင်တဲ့သူတောင် ဘလော့ရေးလို့ ရတဲ့ အချိန်မှာ ရင်ထဲရှိတာတွေ ချရေးခွှုင့်ရတဲ့ ဘလော့ဟာ အားလုံးအတွက်တော့ အိုအေစစ်ကလေးဘဲ။”
ဒီလိုစာမျိုး ရေးလို. ဘယ်လိုသဘော မှမပါပါ ဘူးဆိုတာ တော. ကြိုတင် တောင်းပန် ပါတယ် ၊၊ အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလို ရိုးသားစွာ ရင် ခုန်တယ်လို. ပဲ မှတ်ယူပေးပါ ၊၊ Blog ရေးတဲ. သူ အများစု ဟာ ကိုယ်.ယုံကြည် ချက် လေးတွေနဲ.ကိုယ် ၊ ကိုယ် ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရတာလေးတွေကို ရိုးသားစွာ ရင်ခုန်နေခြင်းပါ ၊၊ ဒီ အထက်က Blogger ကြီးဆို ခဲ့ သလို အိုအေစစ်လေး တွေပေါ.ဗျာ ၊၊
နောက်ထပ် ကျုပ် ရဲ.အသိဥာဏ် လေး တစ်ထွာတစ်မိုက် နဲ.သိရသလောက် ကတော. Blog ရေးနေတဲ့ သူ အများစုဟာ Internet ကောင်းကောင်း အသုံးပြုလို. ရတဲ. နိုင်ငံ ရပ်ခြားမှာ နေထိုင် လုပ်ကိုင်နေသူ တွေများမယ် လို.ထင်ပါတယ် ၊၊ မြန်မာပြည် ကနေ ရေးနေတဲ. ကျွန်တော် လေးစားရသော Blogger များလည်း ရှိပါတယ် ၊၊ သူများတိုင်းပြည် ၊ သူများနေရာမှာ လာရောက်လုပ်ကိုင်နေထိုင်နေရ တဲ.သူ အများစု ရဲ. ရင်ထဲမှာ ခံစားချက်လေး တစ်ခုစီတော. ရှိကြ မှာပါ ၊၊ ဘယ်လောက်ပင် အဆင်ပြေပါတယ် ၊ အထက်ကနေ အလုပ်လုပ် ကိုင်နေရပါတယ် ဆိုပေလင်.ကစား ၊၊ အမေ.အိမ်မှာ မနေရတဲ. သား ရဲ.ဘ၀လို ၊ ခံစားချက်လေး တစ်ခုတော. ရင်ထဲမှာ ရှိနေကြတာပါ ၊၊ အမိမဲ့ သား ရေနည်းငါး ” ဆိုသလို “ အဖမဲ.သား ဟိုချောင် ဒီချောင် ” ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးတော. ခံစားကြရမှာ ပ ၊၊
ဒါကြောင်.လည်း ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရတာလေးတွေ ၊ မြင်တွေ.နေရတာလေးတွေ ၊ ရင်ခုန် ခံစားနေရတာ လေးတွေကို တင်ပြပြီး စိတ်ကျေနပ်မှူလေးတစ် ခု ကို ရယူနေကြရတာပါ ၊၊ ကျုပ်တို.ရဲ. ရင် ထဲက ခံစားချက်တွေကို တနည်းနည်း နဲ. ပေါက်ကွဲနေကြတာ ပါ၊၊ ဖွင်.ထုတ်နေကြတာ ပါ ၊၊ ဒီလိုရေးလို. ကိုယ်.ရဲ.စိတ် ထွက်ပေါက် တစ်ခုအတွက် ရေးချင်ရာ ရေးနေကြတယ် လို.တော. မထင်စေချင်ပါဘူး ၊၊ သတိထားနေတဲ.ကြား က အမှားတွေ တော့ ရေးမိကြမှာ ပါ ၊၊ လူပဲလေ ဆိုတဲ. အမြင်လေး တစ်ခုနဲ. ခွင်.လွတ်ပေးကြ ရ မှာပေါ့ ၊၊ ဒါကြောင်. ကောင်းတာ လေးတွေ ရှိသလို ၊ မကောင်းတာလေး တွေလည်းရှိမှာ ပါ ၊၊ ရေးတက်သူ တွေ ပါသလို ၊ မရေးတက် ရေးတက် ရေးနေသူတွေလည်းပါ မှာပါ ၊၊ ကျုပ်လို ပ ၊၊
Blog တွေကို အရောင် စုံတဲ. ပန်းခင်းလေးလို. ကျုပ်တော. ခံစားမိပါတယ် ၊၊ နှင်းဆီ ၊ ခတ္တာ ၊ ဒေလီရာတွေ ၊ သဇင်၊ ဗန်တာ ၊ သစ်ခွ ပန်းတွေ နဲ. ဝေနေတဲ. ပန်းခြံကြီး ရဲ. အလှအပကို ဒီတိုင်း အဖိုးတန် အမျိုးမှန် တော်ဝင် နန်းထိုက် ပန်းမဟာတွေ နဲ.တင်.တယ်စေတာ အမှန်ပါ ၊၊ သို.ပေငြားလည်း ပန်းခြံကြီးအတွင်းမှာ လူးလားခေါက်ပြန် သွားလာ ကြည်နူးကြသူတွေ လျှောက် လှမ်းကြရာ လမ်းတစ်လျှောက် က ဘာပန်းမှမရှိ ရင် အတော် ကို အရုပ်ဆိုး အကျည်း တန်နေပါလိမ်.မယ် ၊၊ လူတွေသွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အဖိုးမတန်တဲ့ လမ်းလျှောက်ပန်း လေးတွေများ ပျိုးထားရင် ပိုပြီမတင်. တယ်ပေဘူးလားဗျာ ၊၊ လမ်းလျှောက် ပန်းလေးတွေရဲ. အထောက် အပံ့ကြောင်. နန်းထိုက် တဲ. ပန်းတော်ဝင် တွေ ဂုဏ်တင်.မလာပေဘူးလားဗျာ ၊၊ လမ်းလျှောက် ပန်းမရှိပေ သည်. သဇင်ဟာ သဇင်ပါပဲ လို.တော. ဆိုနိုင်သပေါ.လေ ၊၊
ကျုပ်ရဲ.အမြင်မတော. ဘယ်လို ပဲဖြစ်ဖြစ် နုလုံးသားနဲ. နားလည်ပြီး ရင်နှင်.ခံစားလို. အားပေး မိပါတယ် ၊၊ ယူတက်ရင် ရပါတယ် ၊၊ စာကောင်းသော် လည်းကောင်း စာမကောင်းသော် လည်းကောင်း ၊ သေချာတာ တစ်ခုခုတော. ရပါတယ် ၊၊ နောက်ဆုံး ဒီလို Blog မျိုး နောက် မဖတ်တော.ဘူးဆို တဲ. အသိတစ်ခု ရသွားရင်တောင် နောက် တစ် ကြီမ်အတွက် အချိ်န်အများကြီး Save ဖြစ်သွားပါ ပြီ ၊၊ နောက် သူငယ်ချင်း တွေကို သတင်းပေးရင် သူတို. လည်း အချိန်ကုန် သက်သာတာပေါ.ဗျာ ၊၊ ဒါဟာ အနည်းဆုံး ရသွားတဲ့ အမြတ်ပေါ.ဗျာ ၊၊ မဟုတ်ဘူးလား ၊၊ မြန်မာ Blog တွေကို ဖတ်တဲ. မြန်မာ စာ ပေ ချစ် ပရိတ်သတ် တကမ္ဘာ လုံးမှာ သိန်းကျော်မှာပါ ၊၊ ဒီလိုပဲ ရေးတဲ.သူ သိန်းကျော်တော. ရော ပိုမကောင်း ပေဘူးလားဗျာ ၊၊ ရေးတဲ.သူ တွေဟာ လည်း ဖတ်တဲ.သူ တွေပါပဲ ၊၊
လူကြီးဆိုတာ လူငယ်ဘ၀ ကို ဖြတ်သန်းခဲ.ရတာ ပါ ၊၊ ဒီနေ. အောင်မြင်နေတဲ.သူ တွေဟာ လည်း မအောင်မြင်ခင် ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ ၊၊ ကျုပ် ၁၀ တန်းအောင်ကာစ အနုပညာ နဲ. ပတ်သပ်တဲ. အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုထဲကို အခြေချတိုးဝင် ဖို. ကြိုးစားခဲ.ဖူးတဲ့ အချိန်မှာ ကျုပ် အစ်မ တစ်ယောက်က ကျုပ် ကို ဆုံးမတဲ. စကားလေးတစ်ခု မှတ်မိပါသေးတယ် ၊၊ သူဟာ စာတွေရေးတဲ့ စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်မဟုတ် ပါဘူး ၊၊ နောက် ပညာ ရှင်တစ်ယောက် လည်းမဟုတ်ပါဘူး ၊၊ ဒါပေမယ်. သူရဲ. ဘ၀အသိနဲ. ယှဉ်တဲ့ အတွေးလေးမို. ရိုးစင်းပြီး ချစ်စရာ လည်းကောင်းပါတယ် ၊၊ “ ပင်လယ်ဆို တာ ဖြစ်လာဖို. အတွက် အနားသတ်ပေး ရတဲ့ ကမ်းနားဆိုတာ ရှိရတယ် ၊၊ အောင်မြင်တဲ. သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို.အတွက် မအောင်မြင်တဲ. သူတွေဆိုတာ အနားမှာ ၀န်းရံ ဇာတ်ပို.ပေးရတယ် ၊ အနုပညာ အလုပ်ဆို တာ ဟာ ပိုပြီးခက်ခဲ နက်နဲတယ် ၊ ကြောက်စရာလည်း ကောင်းတယ် ၊ နင်အောင်မြင်ရင် ထ်ိပ်ကိုရောက်မယ် ၊ မအောင်မြင်ရင် အနားမှာ ၀န်းရံနေရတဲ့ ဘ၀ ခံနိုင်ရမယ် ” တဲ့ ၊၊ သူအမြင်လေးကို သူ ရိုးစင်းစွာ ကျူပ်အတွက် ဝေမျှသွားတာပါ ၊၊
ဒီလိုပါပဲ ၊၊ Blog တွေဘယ်လောက် ပဲ များနေပါစေ ၊၊ နောက်ပိုင်းမှာ တကယ် တော်တဲ. ၊ သူတွေသာ ကျန်ခဲ့မှာ ပါ ၊၊ နောက် စာဖတ်တဲ.သူ တွေ ဟာ စာရေးတဲ.သူ တွေထက် ပိုတော် ပါတယ် ၊၊ သူတို.မှာ ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်တဲ. အရည်အချင်း တွေရှိပါတယ် ၊၊ သူတို.ကောင်းတာ လေးတွေ ကို ရွေးပြီးဖတ်မှာပါ ၊၊ နောက် စာ ရေးနေတာ ၊ စာ ဖတ်နေတာဟာ မကောင်းပေဘူးလားဗျာ ၊၊ ကျွန်တော်တော. နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် ၊၊ အားပေးတယ် ၊၊ အတွေ.အကြုံတွေ မျှဝေမယ် ၊၊ ကူညီမယ် ၊၊ ဝေဖန်မယ် ၊၊ အကြံတွေ ပေးမယ် ၊၊ နေ.စဉ် ဒိုင်ယာရီရေး တာ တောင် ကောင်းတယ် အလေ.အကျင်.လို. မှတ် ယူ ရင် ကိုယ်. ရဲ.အတွေ.အကြုံ တွေ ၊ ခံစားချက်တွေကို ရိုးသားစွာ မျှဝေတာ မကောင်းဘူးလားဗျာ ၊၊
ကျုပ် ဟာစာတွေရေးတာ ကို တော် တော်ကို ခုံမင်ပါတယ် ၊၊ ဟိုးကလေးဘ၀ စာရေးတက် စကတည်းက စာတွေရေးပါ တယ် ၊၊ တက်ကျမ်းတွေ ၊ ဇာတ်လမ်းတွေတော. မဟုတ် ဘူးပေါ.ဗျာ ၊၊ ကျုပ်ရဲ. ရင်ထဲမှာ ခံစားရတာတွေကို ကျုပ် အစ်မကို တိုင်စာ ရေးတာပါ ၊၊ အမက အိမ်နဲ. မိုင် ၂၀ လောက် ဝေးတဲ. မြို.လေးမှာ ကျောင်းသွားတက်နေရတာပါ ၊၊ အိမ်က တစ်ယောက် ယောက် က ညနေဆိုစားစရာ သွား ပို.တာပါ ၊၊ အဲဒီလူ ကြုံနဲ. စာပါးတာပါ ၊၊ အဲဒီတုန်းက တယ်လီဖုန်းတွေ မရှိတာလည်း ပါမှာပေါ. လေ၊၊ ဒါပေသည်. ခုဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ. ယနေ.ထိ အ်ိမ်ကို စာ ပို.နေဆဲဆို ရင် အံ့အားသင်. ကြမလားဗျာ ၊၊ ဖုန်းလည်း အပတ်စဉ် ဆက်ပါတယ် ၊၊ စာလည်း လူကြုံရှိတိုင်း ၊ ဒါမှမဟုတ် စာတိုက်ကနေတဆင်. စာတွေရေးနေဆဲပါ ၊၊ တခါတလေ နှုတ် နဲ.ပြော လို. အဆင်မပြေတာတွေ က စာနဲ.ရေးတာ ပိုပြီး ကဗျာ ဆန်ပါတယ်၊၊ ကျုပ် က တော. နုတယ်ဗျာ ၊၊ ဒါကြောင်.လည်း စာရေးတဲ. စနစ်က ယနေ.ထိတွင် ကျယ်နေတာ ပေါ.ဗျာ ၊၊
၁၀ တန်းအောင်တဲ. အခါ အခြားဘာသာတွေ အတွက် ထူးပြီးရင်မခုန် ပေမယ်. ၊ မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးအတွက် ယနေ.ထိ ဂုဏ်ယူ နေမိဆဲ ၊၊ ( နောက်များမှ ဆရာ ဂုဏ်ထူးဦသ်ိန်းနိုင် အကြောင်း သပ်သပ် ရေးပါအုံးမည် ) ကျုပ်ရဲ. အဒေါ်တွေ ၊ ဦးလေးတွေကလည်း အဲဒီ အတွက် ပဲ ဂုဏ်ယူနေ ကြဆဲပါ ၊၊ ခုလို Blog တွေ ဖောင်းပွလာ တဲ့ အချိန်မှာ Blog လေးတစ်ခု တည်ဆောက်မိ တဲ့ ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်လည်း ရှက်ရွံ.စွာ မလုံမလဲ လေး ဘာသာ ခံစားမိပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. ကျုပ် စာတွေကို ရေးခဲ.တာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀ ကတည်းက ပါ ၊၊ နောက် ကျောင်းပြီးလို. အလုပ်ထွဲမှာ လည်းစာတွေ ရေးနေဆဲပါ ၊၊ သို.ပေသည်. ၀ါသနာရှင်တို.ရဲ. သဘာဝ စာရေးခြင်း သည် စာရေးခြင်း သပ်သပ် ပ ၊၊ စာရေးရရင် ကျေနပ်ပြီး စာတွေရေးနေ ခြင်းပါ ၊၊ တင်ပြခြင်း ဆိုတဲ. အဆင်.ကို ရောက်မလာခဲ့ပါ ၊၊
ကံအားလျော်စွာ မြန်မာပြည်မှာ ဂျာနယ်တွေ ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ အပြိုင်ထုတ်ဝေ လာတာနဲ. အမျှ ကျုပ် တို.လို ၀ါသနာရှင်တွေ အတွက် အခွင်.အလန်းတွေ ပိုပွင်.လာ ခဲ့ပါတယ် ၊၊ ဒီလိုနဲ. ဂျာနယ်လေးတွေမှာ တင်ပြဖို. ကြိုးစားရင်း စာတွေပိုရေးဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ် ၊၊ ပါလာတဲ. အခါ နောက်ထပ် တစ်ပုဒ်တွေ များစွာ တင်ပြဖို. ကြိူးစားရင် အားတွေ လည်း တက်ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ အားမနာစွာ ဝေဖန်တက်တဲ. ချစ်သူနဲ. တွေ.ရတဲ့ အခါလည်း ဘောပင် မကိုင်မိအောင် ကို ကြိုးစားခဲ.ရပါတယ် ၊၊ တိုးတိတ်စွာ ကျေကွဲခဲ့ရပါတယ် ၊၊ ကိုယ် ရဲ.အသေးအမွှား အောင်မြင်မှူအတွက် မုဒီတာမ ပွားပေးနိုင်လေသော ချစ်သူ ကို ချစ်ခြင်း များစွာဖြင်. မုန်းတိးခဲ.မိပါတယ် ၊၊ စာရေးခဲ့ခြင်း နဲ. ကျုပ် ရဲ. ဘ၀လေး တစိတ် တဒေသ ပေါ. ဗျာ ၊၊
ဒီလိုနဲ. ဒီလိုနဲပေါ. ဗျာ ၊၊ ဒီမှာ အလုပ် လုပ်တဲ. အချိန်မှာ Blog ဆိုတဲ. စကားကို စတင် ကြားဖူးခဲ့ ရပါတယ် ၊၊ ကံကောင်းချင်တော. အတူနေ တဲ. သူငယ်ချင်းက Blog တွေရေးတဲ့ နာမည်ကြီး Blogger တစ်ယောက် ဖြစ် နေခြင်းပေါ. ၊၊ ဒါပေမယ်. ကျုပ် မရေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး ၊၊ အလုပ်က ၆ ရက် လုပ် ရပြီး မနက် ၈ နာရီကနေ ည ၇ နာရီထိ လုပ် ရပါ တယ် ၊၊ Blog ရေးဖို. နေနေသာသာ ၊ ဖတ်တောင် မဖတ်နိုင်ခဲ့ပါ ၊၊ ဒီလိုနဲ. အခွင်. သင်.လာချင်တော. ဒီနှစ် January လမှာ ၅ ရက် ပဲလုပ် ရမယ်. အလုပ်တစ် ခု Offer ရခဲ.ပါတယ် ၊၊ နောက် လုပ် ရတဲ. အလုပ် ကလည်း အရင် အလုပ်လောက် မများခဲ့ပါ ၊၊ အရင် အလုပ်တုန်းက တစ်နေကုန် ထိုင်ချိ်န်တောင် မရခဲ့ပါ ၊၊ ဒါကြောင်. အိမ်ရောက်တာနဲ. တုံးကနဲဆို အိပ်ပျော် သွားပါ ပြိ ၊၊ ယခုလက် ရှိအလုပ်လေးက အနည်းငယ်လေး အအားရလာတာနဲ. Blog ရေ မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးလည်း ၀င်လာခဲ့ပါတယ် ၊၊
မှတ်မှတ်ယယ မွေးနေ.က မတ်လ ၁ ရက်နေ. ၊၊ မှတ်မှတ် ယယ လေး တစ်ခု လုပ်ချင်နေတဲ. အချိန် မှာ ၊၊ Blog ရေးမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးက လန်.နိုးလာခဲ့ပါတယ် ၊၊ နောက် အနားမှာလည်း Bloger သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်က ရေးနေဆဲဆိုတော. ၊ အဲဒီစိတ် ကူးလေးက ပိုပြီး ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ် ၊၊ မြန်မာစာ မရိုက်တက်တာက တစ်ကြောင်း ၊ နားမလည်တဲ့ နည်းပညာတွေက တစ်ဖုံနဲ. မို. မလုပ်ဖြစ်ခဲ့လေသော Blog လေးတစ်ခုကို အားတင်းပြီး အနားက သူ ငယ် ချင်းတွေ အားကိုးနဲ. တည် ဆောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ၊၊ ကျုပ်ကို အားမနားတမ်းဝေဖန်တက်တဲ့ ၊ ကျုပ်ကို ဘယ်တုန်းကမှ အထင်မကြီးသလို ၊ အကောင်းလည်းမမြင်တက်တဲ့ ၊ ကျုပ် ရဲ. ဟိုးတချိ်န်က ချစ်ခဲ့ဘူးသူကလည်း နင် Blog ရေးပါလားလို. အမှတ်မထင် ပြောလာခဲ့တဲ့အတွက် ၊ ဖြစ်နိုင်မလားရယ် လို.ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးနဲ. ၊ ထူးထူးခြားခြား မှတ်မှတ်ယယ အဖေ. အကြောင်းလေးနဲ. ကျွန်တော်. ရဲ့ Blog အ်ိမ်ဖြူလေးကို စတင် တည် ဆောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ၊၊
အစပြုခဲ့တဲ့ ရက်တွေမှာ သင်ပြပေးခဲ.တဲ့ သူငယ်ချင်း Blogger ကြောင့် အားတက်ခဲ့ ရပါတယ် ၊၊ ခုချိန်ထိလည်း ဘာမှနားမလည်သေးပါ ၊၊ စာလုံးတွေ မရိုက်တက်လို. လှမ်းပြော ပြတဲ့ ညီငယ် Blogger တစ်ယောက် ၊၊ Layout Setting ကမှအစ အဆင်မပြေ လို. လှမ်းပြီးပြင်ပေး ရတဲ့ ညီငယ်တို.ကြောင်. အားတွေတက်ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ တဖြည်းဖြည်း တက်လာ တဲ. လာရောက် လည်ပတ်သူ တွေကြောင် . အရင်က တချိန်ကုန် အပြင်မှာ နေတဲ့ ကျုပ် အ်ိမ်မှာ နေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် comment လေးတွေ ကြောင့် ရေး အားတွေ တက်ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ ရိုးသားစွာ ရင်ခုန်ခဲ့ခြင်းပါ ၊၊ ခုချိ်န်ထိ ကျုပ် ရဲ. Blog အိမ် လေးကို အလည်တစ်ခေါက် မရောက် လာခဲ့တဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း နာမည် ကြီး Blogger တစ်ယောက်ကို တော့ နေ. စဉ်မျှော်ရင်းခင်မင်ခြင်းများစွာ နဲ. မုန်းတီးချင်လာမိပါတယ် ၊၊ ဘာလို.များပါလိမ်. လို.လည်းနေ.စဉ်တွေး ရင်းအားငယ် စွာ ၀မ်းနည်း ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ ခုတော.လည်း အထက်က နာမည်ကြီး Blogger တစ်ယောက် ရဲ. Comment လေးကို ဖတ်ရတဲ့အခါ ဒါကြောင်.များလားလေ ရယ်လို. မယုံရဲရဲ အတွေးလေး က ၀င်လာခဲ့ရပါတယ် ၊၊ ဟုတ်နိုင်ပါဘူးလေရယ် လို. လည်း အခါခါ အားတင်း နေရဆဲပါ ၊၊ (အခုတစ်လောဘလော့တွေသိတ်များတယ။် ဖောင်းပွလာတယ်လို့တောင်ခံစားရတယ။် အဆင့်မှီစေဘို့ဘာပေတံ့နဲ့တိုင်းမလဲ။ တိုင်းစရာမရှိဘူး။ ဆယ်တန်းအောင် မှ တက္ကသိုလ်တက်ရမယ်လို့ကန့်သတ်ချက်ရှိပေမဲ့ ဘလော့ရေးဘို့ဘာ ကွာလလီဖီကေးရှင်း ရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူး။အင်တာနက် တစ်ခုရှိရင်ရပြီ။ မြန်မာဖောင့်ကောင်းကောင်း မရိုက်ချင်တဲ့သူတောင် ဘလော့ရေးလို့ ရတဲ့ အချိန်မှာ ရင်ထဲရှိတာတွေ ချရေးခွှုင့်ရတဲ့ ဘလော့ဟာ )
ဒီလိုနဲ. ချီတက်လာခဲ.တဲ. ကျုပ်ရဲ့ Blog လေးကို လာ ရောက် ဖတ်ရှုသူ အားလုံးကို ရင် ထဲက နေ ကျေးဇူးတွေ တင် နေဆဲပါ ၊၊ ကျုပ်ဆီ ကို Email ရှည် ကြီးတွေ ပို.ပြီး ဝေဖန်တဲ့ စာပေ မိတ်ဆွေ တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင် ဆဲပါ ၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်တို ရဲ. သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်း အပေါင်းအသင်း များလည်း ထပ်တူ ရင်ခုန် နေကြမယ် ဆိုတာ ယုံ ကြည် စွာ မျှော်လင်.နေဆဲပါ ၊၊ စောင်.ကြည်.ဝေဖန်ပေးနေတဲ့ စာပေ မိတ်ဆွေ ကို ကျူပ် စာပြန်ခဲ့တဲ့ အထဲက ကျုပ်သူကို ပြောခဲ့တာ လေးကို သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်းများအတွက် မျှဝေပါရစေ ၊၊
“ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ဖတ်မိပြီး ကိုမိုးဝေပြောခဲ့တာလေးကို သွားသတိရလိုက်လို့ပါ။ ကိုမိုးဝေမှတ်မိမလားပဲ...ကိုမိုးဝေရဲ့စာသားတွေကိုပြန်လည်ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင် ဖြင့်...
"ကျွန်တော်.မှာ အဲဒီလို ရည်ရွယ် ချက်နဲ. ရေးခဲ.တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော. ရဲရဲဝံ၀ံ အာမခံရဲပါတယ် ၊၊ ရင်ဘက်ထဲက ခံစားချက်ကို ဇာတ်ကောင်လေးတွေ သုံးပြီး ၊ ဇာတ်လမ်း လေးတွေအဖြစ်တင် ပြခြင်း သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ် အကို ၊၊ ဟုတ်ပါတယ် ၊၊ ရေးခဲ.သမျှ အားလုံးမှာ ခံစားချက်တွေ ၊ အတွေးတွေ ၊ ရင်နှင်. အမျှ ခံစား ခဲ. ဖူးတာလေး တွေကို စကားလုံးလေးတွေ ၊ စာပိုဒ်လေးတွေ အဖြစ် ပုံစံပြောင်းပြီ တင်ပြ ခဲ.ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် ၊၊ကျွန်တော်.ရဲ.ညံ.ဖျင်းမူ ကြောင်. အရောင် ပြောင်းပြီး ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ လွဲမှားခဲ. တာတော. စိတ်မကောင်းပါဘူး ၊၊"” လို.ကျွန်တော် ပြန် ပြောခဲ့သလို
ကိုမိုးဝေရဲ့အောက်ဖော်ပြပါစကားလေးများအတွက်လည်း ကျွန်တော် ၀မ်းသာ ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။
"အဲဒီလိုမဖြစ်အောင်တော. ကျွန်တော် သတိပြုဆင်ခြင်သွားပါမယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. ကျွန်တော်. ရဲ.ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကိုတော. ဆက်ရေးနေဖြစ်အုံးမယ်အကို၊၊" လို. ကျွန်တော် စာပြန်ခဲ့ပါတယ် လေ ၊၊
စာပေမိတ်ဆွေက ကျုပ်ကို ကိုမိုးဝေ လို.ပဲ ခေါ်ပါတယ် ၊၊
တရားစခန်းဝယ် ၂ ( ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် နှင်. ဆုံစည်းခြင်း )
ဒီလိုနဲ.ကျွန်တော် တို.ညနေ ၄ နာရီလောက် မှာ စတင်ထွက်ခွာလာ တဲ. မြတ်မ န္တလာ ထွန်းကားကြီးဟာ ညဖက် ၁၂ နာရီလောက်မှာ ခင်သန်းနုတို.ရဲ. ဇာတိ ကျောက်ပန်းတောင်းကို ရောက်ရောပေါ့ဗျာ ၊၊ ညဖက် မိုးအလင်း ဖွင်.ထဲ. လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ထိုင်ပြီး မနက်လင်း မှ ပုပါးကို ခရီး တ၀က် ဆက်ရမှာ ပါ ၊၊ ပုပါးကို တက်မယ်.ကားတွေက မနက် အစော မှ ထွက်မှာပါ ၊၊ ဒါကြောင်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စောင်. ရတော.မှာပါ ၊၊ လဖက်ရည် ဆိုင်နားမှာ က ဘုရာတစ်ဆူရှိတော. ကျွန်တော်တို. လည်း ဘုရားပေါ်မှာ တက် ၀တ်ပြုပြီး ဘုရားပေါ်မှာပဲ အိပ်လိုက်ပါတယ် ၊၊
နောက် မနက် မိုးလင်း ၄ နာရီလောက်မှာမှ တောင်ပေါ်တက်မယ်. ကားတွေ စလာပါတယ် ၊၊ ဒီလိုနဲ. တောင် ခြေရင်းက တရားဝင်မယ်. ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းကို ရောက် ရော ဆိုပါတော.ဗျာ ၊၊ ဒီလိုနဲ. သင်္ကန်း ၀တ် ၊ သိမ်ဝင် စတဲ. လုပ်ကိုင်စရာ ရှိတာတွေကို ဆရာတော်ကြီးရဲ. အစီအမံတွေနဲ. လုပ်ဆောင်ရပါတယ် ၊၊ ရောက်ပြီး နောက် တစ်နေ. မှာ သင်္ကန်းဝတ် တဲ. ကိစ အားလုံးပြီးတော. တရားစခန်းစပါတယ် ၊၊ စုစု ပေါင်း ရဟန်း အပါး ၅၀ ကျော် ၊ မယ်သီလ အပါး ၄၀ ကျော်နဲ. ယောဂီကတော. ၂၀၀ နီးပါး ရှိမယ် ထင်ပါတယ် ၊၊ ဓမာရုံ အပြည်.ပေါ.ဗျာ ၊၊
စုစုပေါင်းတရားစခန်း က ၁၀ ရက်စခန်းပါ ၊၊ နောက် ရဟန်းတွေအားလုံး က ဆွမ်းခံစားရပါတယ် ၊၊ နောက် ဓူတင် ဆောင်ရပါတယ် ၊၊ မနက် ၄ နာရီဆိုရင် စတင်ပြီး ကျောင်းဝန်းထဲက သစ်ပင်တွေ အောက် မှာ သပိတ် ယူပြီး တရားထိုင်ရပါတယ် ၊၊ တနေ.တာရဲ. ပထမဆုံး အကြိမ်ပေါ. ၊၊ နောက် မြေကြီးပေါ်မှာ ဖျာကြမ်း အသေး လေး နဲ. ဒီတိုင်းထိုင်ရတာပါ ၊၊ ခြင်ကိုက်တော. သင်္ကန်းတွေကို ခေါင်းခြုံခွင်. ပေးပါတယ်၊၊ အိပ်ငိုက်တဲ. သူတွေအတွက်တော.( ဟဲဟဲ ) ဂွင်ပေါ.ဗျာ ၊၊ တချို.လည်း ရှေက သပိတ်နဲ. မိတ်ဆက်တာ ခွက် ခနဲတောင် အသံ ထွက်ပါတယ် ၊၊ ဒါကတော.မနက် ပိုင်း တချိန်ပေါ.ဗျာ ၊၊ အိပ်တော.ငိုက် ကြမှာပဗျာ ၊၊ ဓူတင် ဆောင်တယ် ဆိုတော. သင်္ကန်း က အားလုံးမှ ၃ ထည် ပဲ ဆောင်ခွင်. ရှိပါတယ် ၊၊ ဒီထဲကမှ သင်္ကန်းကြီး လို. ခေါ်တဲ. တထည်ကို ခေါင်းအုံးအိပ် ရတာပါ ၊၊ ခေါင်းအုံးလည်း ပေးမသုံးပါဘူး ၊၊ အိပ်တော.လည်း ဖျာကြမ်း ကြီးပေါ်မှာ ၊၊ ဘာမှ စောင်ရော သုံးခွင်.မရှိပါဘူး၊၊ ဒါဟာ ဓူတင်ဆောင်တာမို. အားလုံးကို ခြိုးခြံရပါတယ် ၊၊
နောက် မနက်ပိုင်း တရားဖြုတ်တော. ခဏပေးနားပါတယ် ၊၊ နောက် အာရုံဆွမ်း ဘုန်းလို.မရပါဘူး ၊၊ တစ်နေ. လုံးကိုမှ ဆွမ်းတစ်နပ်ပဲ ဘုန်းရပါတယ် ၊၊ ဆွမ်းခံကြွတော. ကိုယ်. အစု နဲ. ကိုယ် နီစပ်၇ာ ရွာတွေကို ကြွရ ပါတယ် ၊၊ အနီဆုံး ရွာက ၃ မိုင်ဝေးပါတယ် ၊၊ ဆွမ်းခံတယ် ဆိုတော. ဖိနပ်လည်း စီးခွင်.မရှိပါဘူး ၊၊ ရွာသူ ရွာသားတွေက သဒ္ဒါတရား အတော် ကို ကောင်းကြပါတယ် ၊၊ ကျွန်တော်က အရပ်မြင်.တော. တန်းစီရင် နောက်ဆုံးက လိုက်ရပါတယ် ၊၊ အဲဒီတော. ပိုသမျှဆွမ်းက ကျွန်တော်. သပိတ်ထဲမှာ ၊ နင်.နေအောင်သယ် ရပါတယ် ၊၊ ဆွမ်းတွေရော ၊ ဟင်းတွေရော ရောပြီးလောင်းကြတာပါ ၊၊ နောက် ပိုင်းတော. ကျွန်တော် သပိတ် ဖွင်.ပေးရမှာတောင် ကြောက်လာပါတယ် ၊၊ ဝေးကလည်းဝေး ၊ သပိတ်ကလည်းလေး ၊ သင်္ကန်းကြီးက တမျိုး ၊ နေကလည်းပူ ၊ ဖိနပ်ကလည်းမစီးရ အညာ မြေ ဆူးတောထဲမှာ ၊၊
ဆွမ်းစားတော.လည်း ကိုယ် သပိတ်နဲ.ကိုယ် ပဲ ဘုန်းရပါတယ် ၊၊ ဟင်းခွက် ၊ ဆွမ်းခွက် အပို ဆောင်ခွင်. မရှိပါ ဘူး ၊၊ အချိုပွဲတောင် ဒကာမတွေက သပိတ်ဖုံးထဲ မှာပဲ လာထည်. သွားတာ ပါ ၊၊ နောက် ကိုယ်. သပိတ် ကိုယ်ဆေးပြီး မှတ် ထားရပါတယ် ၊၊ ဒီသပိတ်က ၁၀ ရက်တာ အတွက် အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ် ၊၊ မနက် တရားထိုင်သွားရင် ယူသွားရပါတယ် ၊၊ နောက် ဆွမ်းခံရာမှာ သုံးရပါတယ်၊၊ ဒါကြောင်စင် အောင် ဆေးပြီး သေချာ မှတ် ပြီးသ်ီမ်းထားရပါတယ် ၊၊ သပိတ် အကြီးရထားတဲ့ ကိုယ်တော် က အသေးနဲ. မှားသလိုနဲ. လဲ သွားတာ မျိုးကြုံတက်တော. သတိလည်းထားရပါတယ် ၊၊
ဒီလိုနဲ.တရား ထိုင် ဖို. ဒုတိယပိုင်း အဖြစ် ဆွမ်းစားပြီးတာ နဲ. ပြန်စပါတယ် ၊၊ နေ.ပိုင်းမှာ ၂ ကြိမ်ထိုင်ရပါတယ်၊၊ နောက် ညပိုင်းရောက် တော. ဘုရားဝတ်ပြုတာ ၁ နာရီနဲ. တရားထိုင်တာ တကြီမ် ဆက်ရပါတယ် ၊၊ နောက် ည ၉ နာရီလောက်မှာ တရားစခန်း တနေ.တာ အဆုံးသတ်ပါတယ် ၊၊ ပထမပိုင်း ရက်တွေမှာ ပင်ပန်းပေမယ်. နောက် ပိုင်း ၅ ရက် ၆ ရက်မှာ တော. အတော်ကို အဆင်ပြေလာပါတယ် ၊၊ ထိုင်လို.လည်းကောင်းလာသလို ဆွမ်းခံ ကြွရတာလည်း ကျင်.သားရလာပါတယ် ၊၊ အတော်လေးလည်း ငြိ်မ်သက်လာတယ် ပေါ.ဗျာ၊၊ စိတ်ထဲမှာလည်း ကြည်ကြည်လင်လင် လေး ရှိလာပါတယ် ၊၊ နောက် ဆရာတော် က တုတ်ချက်ပြင်း တော. ငိုက်တဲ.သူ လည်းမရှိတော.ပါဘူး ၊၊ တရားတက်လာကြတယ် ဆိုရမှာပေါ.ဗျာ ၊၊
ဒီလိုနဲ.မှတ်မှတ်ယယ ၈ ရက်မြောက်တဲ. ညရဲ. နောက်ဆုံးတရား ချိန်မှာ ပေါ.ဗျာ ၊၊ ကျွန်တော် ဆိုခဲ.သလို ဘုန်ကြီကျောင်းက ပုပါး တောင် အတက် ရဲ.အစ ၊ Popa Resort Hotel ရဲ. ဘေး ခြံတခြံကျော်မှာပါ ၊၊ ကား လမ်းနဲ.လည်းလှမ်းပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ်. ညဖက်ဆိုရင် တော. ဖြတ်သွားတဲ.ကားသံတွေ ကြားရပါတယ် ၊၊ အဲဒီ တစ်ည ၈ နာရီ ခွဲလောက် တရားအရှိန်ရနေတဲ. အချိန် ၊၊ လူခြေတွေကတိတ်လို. တရားမှတ် တဲ. အသက် ရှူသံ ပြင်းပြင်းတွေ ကလည်း ညီလို. ၊၊ ဓမာ ရုံတစ်ခုးလုံး တိတ်ဆိတ်ပြီး တရားမှတ်သံပဲ ရှိနေတဲ. အချိန်မှာ ပေါ.ဗျာ ၊၊
ကျွန်တော် ထင်တာတော. Popa Resort Hotel ကထင်ပါတယ် ဗျာ ၊၊ လူခြေတွေတိတ်ပြီး ငြီမ်လို. တရား မှတ်နေကြတဲ. အချိန်မှာ ၊၊ “မီး နဲ. ရေ …… ဘယ်အရာကို ခွဲမလဲ ………… ရေနဲ.မီးနဲ. ကြားမှာ နှလုံး သားလေးဟာ မခွဲခြား သေးဘူး ” ဆိုတဲ. တေးသံရှင် Tun Endrain Bo ရဲ. မီးနဲ.ရေ ဆိုတဲ. သီချင်းသံ က စီ.....ပြီးထွက်လာတာဗျာ ၊၊ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ၊၊ တခါဘူးမျှ ဒီလောက်ကောင်းတာ မကြားဖူးဘူး ၊၊ တကယ်ပါ ၊၊ တရားက အရှိန်တက် နေကြတဲ.အချိန် ၊ သီချင်နားမထောင်ရတာက ၈ ရက် ၉ ရက် ၊၊ ညကလူခြေ တိတ်နေ တဲ.အချိန် ၊၊ ကျွန်တော် တို.ရဲ. သမာဓိတွေ တည် ငြီမ်ပြီး စုစည်းနေတဲ.အချိန် ၊၊ အားပါး ပါး ကောင်းလိုက်တာ ၊၊ နားထဲကို အီဆိမ်. ပြီးဝင်သွားတာ များဗျာ ၊၊ အဆိုရှင် ကိုယ် တိုင် ခုချိန်မှာ လာ ဆိုပြ ကျိန်းသေတယ် ၊၊ အဲဒီတုန်း က လောက်မကောင်းဘူး ၊၊
အားလုံးငြီမ် ပြီးမျောသွားကြတာ ၊၊ ဆရာတော်ရဲ. ဒုတ်သံနဲ . ဟဲ.အကောင် တွေ ကောင်မတွေ ဆိုတဲ. ငေါက်သံကြား မှပဲ တရားမှတ် အသက်ရှူသံတွေ ပြန် အသက်ဝင်လာပါတော. တယ် ဗျာ ၊၊
ကြုံခဲ.ဘူးတဲ. သင်္ကြန် တွင်း တရားစခန်းလေး တစ်ခုမှာ ပေါ.ဗျာ ၊၊
မှတ်မှတ်ယယ အဲဒီသင်္ကြန် နှစ်က တရားစခန်း ၀င်ဖြစ်ခဲ.တယ်လေ ၊၊ ၂၀၀၂ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ၊၊ အသက် တွေက ကြီးပြီ ဆိုတော.ခုနှစ်တွေက မမှတ်မိ ချင်တော.ဘူး ၊၊ ဒါက အရေးမကြီး ပါဘူး ၊၊ အရေးကြီး တာက သင်္ကြန် အမှီ ဒီ Post လေး တင်ရေး ၊၊ ဟုတ်ပါဘူး ၊ မှားကုန်ပြီ ၊၊ တချိန်ကုန် သတိမယ မေ့ထား ပေမယ်. အကြောင်း အရာလေး တိုက်ဆိုင်လာ တော.သတိယပြန်ရော ၊၊ သင်္ကြန်သံလေး ကြားရ ပြန်တော. ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်မှာ မူးခဲ. ပျော်ခဲ.တာလေး တွေလည်း လွမ်းမိရဲ. ၊၊ ရည်းစားနဲ. သွားခဲ.လာခဲ.တာလေးတွေ လည်းသတိယ မိရဲ. ၊၊ (ရည်းစားမရှိလို. စိတ်ညစ်နေတဲ. လူပျိုကြီး ကိုဒီပ တို.ဆို ဒီလို မရေး နိုင်ပါ ဘူး ၊ စိတ်ဆိုးနဲ.နော် စတာ ) နောက် သင်္ကြန် တွင်း လည်ဖို. ပျော်ဖို. အာရကေ မရှိ လို. ဘုန်းကြီး ၀တ် ခဲ.တာလည်း အမှတ်ယရဲ. ၊၊ မှတ်မှတ် ယယ သင်္ကြန်တွင်း အဲဒီတစ်နှစ် ပဲ ကောင်းမှူလေး လုပ် ဖူးပါ ရဲ. ၊၊
ဟိုး မြန်မာနိုင်ငံ အလည်ပိုင်း ရဲ. အိုအေစစ်လို. ပြောကြတဲ. ၊ စကားဝါ ပန်းတို. ပွင်.လန်းရာ ၊ မယ်ဝဏ တို.ပျော် စံရာ ပုပါး ဆိုတဲ. နေရာ လေးမှာပေါ.ဗျာ ၊၊ ဘုန်းတော်ကြီးက တောင်တွင်းကြီးက ဗိသာနိုးနန်းတွင်းက သာသနာပြုဆရာတော် ဦးစီးပြီးဖွင်.တာပါ ၊၊ ဆရာတော်က ကျွန်တော်တို.ရွာ ဇာတိပါ ၊၊ ကျွန်တော်.မိဘ တွေကိုးကွယ်တဲ. ဆရာတော်ပါ ၊၊ သူကဒီလိုပဲ တရားစခန်းတွေ ဖွင်.တယ် ၊၊ သင်္ကြန်ဆို ပုပါးမှာ ၊ ကဆုန်လဆို ရွာမှာ ၊ နောက် တောင်တွင်းကြီး နန်းထဲမှာလည်း ဖွင်.တယ် ၊၊ နောက် ဖြူးဆရာတော်ကြီးနဲ.လည်း ပွဲတွေ လုပ်ပါတယ် ၊၊ ဖြူးဆရာတော် ကြီးလည်း ကြွလာတက်ပါတယ် ၊၊ ကျွန်တော်တို.ဒေသ က လူတွေကတော. တော်တော် လေးကို ယုံယုံ ကြည်ကြည် ကိုးကွယ် ကြပါတယ် ၊၊
တချို.လူတွေကို ဆို တော်တော်ကို ယုံကြည်ကြပါတယ် ၊၊ ဆရာတော် ဆွမ်းခံ သပိတ်ထဲက ဆွမ်းကျန်ကို စားဖို. စောင်.နေသူလည်း မနည်းပါ ဘူး ၊၊ ဒါတွေကတော. သူ.ယုံကြည် မှူနဲ.သူပေါ.လေ ၊၊ ဆရာတော်ဆိုလို. တလက် စတည်း ဆရာတော် အကြောင်းပြောရအုံးမယ် ၊၊ ဆရာတော် ကို ကိစအားလုံးပြီး နေပြီလို.လည်း ကျွန်တော်တို. ဒေသတ၀ိုက်မှာတော. သမုတ်ကြပါတယ် ၊၊ နောက် ယုံကြည်မှူအရ အစွမ်းပြတာတွေ လည်းရှိတာပလေ ၊၊ ဒါတွေကတော. လူကြီးတွေနဲ. ယုံကြည်သူတွေ ရဲ. အလုပ်ပါလေ ၊၊ ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက် တော. ဆရာတော် ဟာ စကားပြောတာတော. တော်တော် ကို ကြမ်းပါတယ် ၊၊ ဘယ်တော.မှ နာမည် မခေါ်ပါ ဘူး၊၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ကောင်မတွေ ၊ အကောင်တွေ ပဲခေါ်ပါတယ် ၊၊ ကျွန်တော်တို. လည်း နားယဉ်သွားပါပြီ ၊၊ ကြားခါစတော. တမျိုးပေါ့ ၊၊ အဖေတို. အမေ တို. ကိုးကွယ်ပေမယ်. ကျွန်တော်တို. မောင်နှမတွေကတော. တော်တော် ကြောက်ကြပါတယ် ဆရာတော်ကို ၊၊ ကွယ်ရာမှာတောင် ဘာမှမပြောရဲပါဘူး ၊၊ ပြောမိရင်လည်း နင်ပြောတာနော် ၊ငါမပြောဘူး ဆရာတော်က သိတယ်တဲ. ဆိုပြီး တစ်ယောက်နဲ. တစ်ယောက် စတက်ပါတယ်၊၊
အဲဒီတော. သင်္ကြန်ရက် ဆရာတော်ဆီမှာ ဘုန်းကြီးသွားဝတ် မယ်ပြောတော. အဖေတို. အမေတို. က ထီပေါက်သလောက် ပျော်တာပေါ. ၊၊ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ. ၊ အားလုံးအဆင်သင်. ၊၊ သွားရမှာက ပုပါးကို ၊၊ ကျွန်တော်တို. ရွာက သွားတဲ. သူတွေက အားလုံးသွားကုန်ကြပြီ ၊၊ ဘယ်သူမှ မကျန်တော.ဘူး ၊၊ နောက်လိုက်မေး တော.လည်း အားလုံးက သူ.အစီအစဉ်နဲ.သူ ၊၊ ဒီခရီးမျိုးက ကြိုစီစဉ်ရတာလေ ၊၊ ကျွန်တော်. လို. စိတ်ကူးပေါက်မှ ထသွားလို.ရတာမျိုးမဟုတ် ၊၊ သင်္ကြန်ရက်ကြီး ၊၊ အဖေလည်းမနေရ ၊ အမေ လည်းမနေရ ပေါ. ၊၊ ဒုက္ခပေးတာ မွေးကတည်းက ဗျ ၊ ကျုပ်ဆိုတဲ.ကောင်က ၊၊ အဖေကတော. အမေ.မျက်နှာနဲ. လိုက်မေးနေရပေ မယ်. သိပ်တော. မကြည်ဘူးပေါ.ဗျာ ၊၊ အမေ.ပုံကလည်း အဆင်မပြေရင် အဖေကို. လိုက်ပို.ခိုင်း မယ်.ပုံကိုး ၊၊
နောက်ဆုံးတော. ကျုပ်ကပဲ ၊ ရတယ်အမေ သားမြိုကနေတဆငိ. ကားနဲ.သွားမယ်ပေါ့ ၊၊ အမေကို စိတ်ချမ်းသာ အောင်ပြောပြီး ထွက်လာခဲ.တယ် ၊၊ သိတဲ.အတိုင်း ဒီရက်တွေ ဘယ်မှာ လက်မှတ်ရမတုံး ၊၊ မြို.က သူငယ်ချင်းက သူလည်း လိုက်မယ်ဆိုတော. ၂ ယောက်ပေါ့ ၊၊ ကားတွေလိုက်မေးတာ ဘယ်မှမ်ါရဘူး ၊၊ မြတ် မန္တလာ ထွန်း ကားတွေပေါ.ဗျာ ၊၊ ဘယ်ကားမှ ခုံ မကျန်ဘူး ၊၊ စဉ်းစားကြည်.ပါအုံး၊၊ ဘယ်ကျန်မတုံးဗျာ ၊၊ ဒါပေမယ်. အမေကတော. မှာလိုက်တယ် ၊၊ သား ဆရာတော်ကို လှမ်းလျှောက်လိုက် ၊၊ အမေလည်းဒီကနေ လျှောက်လိုက်မယ် တဲ. ၊၊ ပြန်ပြောလိုက်သေးတယ် အမေ.ကို အမေကလည်း သူဟာသူ နေတဲ. ဆရာတော် ကို လှမ်းဒုက္ခပေး နေပြန်ပါပြီလို. ၊၊ သူလည်းသူ. ယုံကြည်မှူနဲ. သူပေါ.လေ ၊၊
သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် ဆိုင်ကယ်တစီးနဲ. တလည်လည် ပေါ.ဗျာ ၊၊ ဒါပေမယ်. ကျုပ်လည်း ကြံရာမရတဲ. အဆုံး ၊ စိတ်ထဲကနေ အမေပြောတဲ.အတိုင်း ဆရာတော်ကို လှမ်းလျှောက်လိုက်တယ် ၊၊ " ဆရာတော်ဘုရား တပည်.တော် တို.၂ ယောက် အမှန်တကယ် လာချင်ပါသည်ဘုရား ၊ တပည့်တော်က ဘုန်းကြီးဝတ်ပါမည် ၊ သူငယ်ချင်းက တရားစခန်းဝင်ပါ မည် ဘုရား ၊ သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေအောင် ကူညီတော်မူပါ ဘုရား " ဆို့ပြီးလျှောက် လိုက်တယ် ဗျာ ၊၊ စိတ်ထဲကလည်း အမှန်တကယ် ယုံယုံ ကြည်ကြည် နဲ.ပါ ၊၊ စဉ်းစားကြည်. ပါနော် ၊ မန္တလေး လမ်းကို သင်္ကြန်ရက် တရက်ကြို လက်မှတ်ဖြတ်တာ ကျုပ်တို. ပဲရှိမယ် ၊၊ ရလိုရငြား ပတ်ကြည်. ရအောင်ဆိုပြီး နောက်တစ် ပတ်ပတ်ကြပြန်ရော ဗျာ ၊၊ ကားဝန်းထဲမှာ ပေါ . ဆိုင်ကယ်တစင်းနဲ. ၊၊ ကြုံရာ ကြားခုံ နဲ.လိုက်ပါမယ် ဆိုတာတောင် ဘယ်ကားမှ မတင်ချင်ဘူး ၊၊ ဟုတ်ပါတယ် လေ ၊၊ ခရီးရှည် ကြီးဘေးလူတွေက ရှိသေးတာ ကို ၊၊
တကယ်ကို Surprise ဗျာ ၊၊ ခုံနံပါတ် ၁ နဲ. ၂ ကို ကားဆရာက ခေါ်ပေးတယ် ၊၊ ဘယ် လောက်များ အံအားသင်. စရာကောင်းသလဲ ၊၊ ခုံမရလို. တန်းစီစောင်.နေ သူ တွေအများကြီး ၊၊ ကိုယ်တွေရှေ.မှာ ၊၊ စဉ်းစားကြည်. တော်တော် ကို အံ့သြဖို. ကောင်းပါတယ် ၊၊ အဲဒီတုန်းက ၁၁ ရက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ၊၊ သင်္ကြန် မတိုင်မီ ၂ ရက်ပဲ လိုတော.တယ် ၊၊ ဘာအပိုကြေးမှ လည်း မပေးခဲ.ရဘူး ၊၊ ဒါနဲ.လက်မှတ်ကို အမြန်ယူပြီး အိမ်ကို လှမ်းဖုန်း ဆက် အကြောင်းကြားရတာပေါ.ဗျာ ၊၊ အဖေကတော. ပျော်တာပေါ. ၊၊ သူ.အတွက်လည်း ပြောစရာရသွားတယ် လေ ၊၊ ကျုပ်သားပေါ. ဆိုပြီးဆရာတော်နဲ. ပတ်သပ်လို. သူ.ကိုယ်တွေ.အဖြစ် သူ. သူငယ်ချင်းတွေကြား ပြောလို. ရသွားတာကိုး ၊၊ ( သားလိမ္မာ ဆိုတာ ဒီလိုသားမျိုးပေါ.ဗျာ ) ၊၊ ( သူ.သားလူချော ကို စာရေးမလေးတွေ ကြောင်ပြီးပေး လိုက်တာ အဖေမသိ ရှာဘူ: kwi kwi ) ၊၊ တကယ် ပါ ဗျာ ၊၊ ကျုပ်လည်း အံအား သင်.ပါ ရဲ. ၊၊ တိုက်ဆိုင်မှူ ဆိုရင်တောင် တော် တော် ထူးခြားတဲ. တိုက်ဆိုင်မှူလို. သတ်မှတ်ရမယ် ၊၊ ဒီလိုနဲ. ကားကိစ အဆင်ပြေ သွားရော ဆိုပါတော.ဗျာ ၊၊
.(အခုခေတ် လူငယ်တွေ မိဘအပေါ် ပိုပြီးသိတက် လာပါတယ် ၊၊ ကျပ်တည်းလာတဲ. ခေတ်အခြေအနေ ကို နားလည် လာကြ လို.လား ၊၊ အသိဥာဏ် တွေ ပိုရှိလာ ကြလို.လား ၊၊ )
၂၀၀၇ - ခုနှစ် က ရန်ကုန်တိုင်း ဂျာနယ်တွင် ဖေါ်ပြ ၊ ပါရှိသော ဟိုယခင်က ကျွန်တော်၏ လက်ရာ ဆောင်းပါး တိုလေးအား ကူးယူတင်ပြ မျှဝေလိုက် ရပါသည် ၊၊
အခုခေတ် လူငယ်တွေဟာ မိဘအပေါ် ပိုပြီးသိတက် လာကြပါတယ် ၊၊ ကျပ်တည်းလာတဲ. ခေတ်အခြေ အနေ ကို နားလည် လာကြ လို.လား ၊၊ အသိဥာဏ် တွေ ပိုရှိလာကြလို.လား ၊၊ ရှာဖွေ ရုန်းကန် နေရတဲ. မိဘတွေကို ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ခဲ.လို.လား ၊၊ ဘာ.ကြောင်. မှန်းမသိ ပေမယ်. ဟိုအရင် လူ တွေထက် ဘ၀အသိ ပိုရှိ လာကြ တာတော့ ကျန်းသေ ပါသည် ၊၊ အရွယ်ရောက် လာတာနဲ. အလုပ်ဝင်ဖို. အဆင်သင်. ဖြစ်နေ ကြပြီး မိသားစုကို တဖက် တလမ်း က ကူညီနိုင်သမျှ ကူညီကြ ပါတယ် ၊၊ မှန်မလား မှားမလား တော. သေချာ မသိရပါဘူး ၊၊ စစ်တမ်း ကောက်မထားတဲ. အတွက် လည်း ကိန်းဂဏန်း အတိအကျ တော. မဖေါ်ပြနိုင် ပါဘူး ၊၊ သေချာတာကတော. အရင်ခေတ် နဲ. ယခုနောက်ပိုင်း ခေတ် လူငယ်များ၏ ရပ်တည် ရမှူပိုင်း တော. တော်တော် လေးကို ခြားနားသွား ခဲ.ရပါပြီ ၊၊
ဟိုအရင် မဆလ ခေတ်မှာ လူဖြစ်ခဲ.ရတဲ. နောင်တော် တွေ ဆိုရင် ကျောင်း တက်မယ် ၊၊ ဘွဲ.ရရင် သင်.တော် ရာ အလုပ်တစ်ခုဝင် ၊ ပြီးရင် မိန်းမယူ လို. အိမ်ထောင်တစ်ခု ကို ထူထောင်မယ် ဆိုတဲ. စီမံကိန်း အဆင်သင်. ရှိကြပါတယ် ၊၊ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် သမရိုးကျ ဘ၀ တစ်ခု ကို တည်ဆောက် ကြတယ် လို. ဆိုရမလား၊၊ မိဘများကို တပြန်တလှည်. လုပ်ကျွေးရအုံး မယ်ဆိုတဲ. စိတ်ကူး မျိူး မရှိကြ ပါဘူး ၊၊ ( အများစုလို. သုံးပါတယ် ၊ အားလုံးကို မဆိုလိုပေ မယ်. ၊ ရာခုိုင်နှုန်း အတော် များများကတော. မရှိတာသေ ချာပါတယ် ) ၊၊ ရှိရင်တော. ရှိပါလိမ်.မည် ၊၊ သို့သော် ရှားပေလိမ်.မည် ၊၊ အခြေအနေကလည်း ဒီဖက်ခေတ် လောက် မလိုအပ် ခဲ.ပေကိုး ၊၊ ဒါဟာလည်း သူတို. ရှင်သန် ကြီးပြင်း ခဲ.ရတဲ. ခေတ် အခြေ အနေက သူတို. ရဲ. အသိတွေကို ဘောင် ခတ်ပေးခဲ.တာပါ ၊၊ အဖေလုပ်တဲ.သူ တစ်ယောက် ရှာတဲ.ငွေက လောက်ငှ တာကို ၊၊ နောက် ခေတ်ရဲ. တောင်းဆိုမှူ ဆိုတာလည်း ဒီလောက် မများ ခဲ.ဘူးလေ ၊၊
ဒါပေသည်. ဒီဖက်ခေတ်မှာ လူဖြစ်လာရသည်. ၊ ယခုနောက်ပိုင်း လူဖြစ်လာရသည်. လူငယ်တွေမှာ တော. ဒီလို သမရိုး ကြ ဘ၀မျိုး မစဉ်းစားနိုင် ကြရိုး အမှန်ပါ ၊၊ ကျောင်းတက် နေကြဆဲ ကာလ မှာကိုက တဖက် တလမ်း မှ မိသားစု ကို ၀င်ကူနေရပါပြီ ၊၊ နေ.ကျောင်း အဆင် မပြေ ၊ အဝေး သင်ပြောင်း လို. ကိုယ်ဘ၀ ကိုယ် ကျောင်းနေရပါပြီ ၊၊ တဖက်တလမ်းက ၀င်ငွေရမည်. အလုပ်မှန်သမျှ ၊ အရောင်းစားရေးကစ ၊ ကား စပါယ်ရာ အလယ် ၊ ကျုရှင်ဆရာ အဆုံး ကိုယ် ကျင်လည် ၀င်ဆံ့နိုင် မယ် . ဘ၀မျိုး စုံ ကို ၀င်ရောက် နေရာ ယူကြရပါတယ် ၊၊ နောက် ခေတ်ရဲ. တောင်းဆိုမှူ ဆိုတာလည်း များသထက် များလာ ခဲ.ပါ သည် ၊၊ လိုအပ်ချက်တွေ ကို အမှီ ဖြည်.စည်း နိုင်ဖို. ကြိုးစား ရုန်းကန်ကြရ ပါသည် ၊၊ အဖေလုပ်တဲ.သူ တစ်ယောက် ရှာတဲ.ငွေက လောက်ငှ ဖို. မလွယ်ကူတော.ပါ ၊၊
ဒါဟာ ခေတ်ကပေးတဲ. သင်္ခန်းစာ ၊ တာဝန် နဲ. ၀တ္တ ရား ဆိုတဲ. မလွဲမသွေ လက်ခံ ရမယ်. ဆုလဒ်ပါ ၊၊ဒီလိုနဲ. ကျောင်းပြီးသွား လို.လည်း ကိုယ်ဘ၀ တစ်ခုကို ခွဲသွားဖို. ၊ တစ်အိုးတစ်အိမ် ထူထောင်ဖို. ၊ မစဉ်းစား နိုင် ကြ ပါ ဘူး ၊၊ မပြီဆုံးသေး သော အငယ် ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အတွက် ၊၊ ကျန်နေခဲ. ရှာမယ်. မိဘ အိုကြီးအိုမ နှစ် ပါးအတွက် ၊၊ ဘယ်လို အတွေး အခေါ် အယူအဆ မျိုး ၊စိတ်ဓါတ် မျိုး နဲ. ကျော ခိုင်းခဲ့ နိုင်ပါမတုံး ၊၊ “ မိဘတွေ ကို ဘာမှလုပ် မပေးရသေး ဘူးကွ ” ၊ “ ငါ. မိဘတွေ ကို ပြန် လုပ်ကျွေးရအုံး မယ် ကွာ ” ၊ “ အဖေတို. အမေတို. ကို ပြည်. ပြည်.စုံ စုံ လေးထားခဲ့ ချင်တယ် ကွာ ” ဆိုတဲ. စကားမျိုး ကို ပဲ အမြဲကြားရပါတယ် ၊၊
ဒါဟာသူတို. ရင်ထဲကလာ တဲ. ဆန္ဒ စကား အမှန်ပါ ၊၊ ဒါ.ကြောင်.လည်း တော်ရုံ ဆို အိမ်ထောင်ရေးကို ဦးစားမပေး နိုင်တော.ပါဘူး ၊၊ “ ယူမယ်ဆိုရင်တောင် အိမ်ကိုတော. ပြည်.ပြည်. စုံ စုံ လေးထားခဲ. ချင်တယ် ၊၊ ကိုယ် အိမ်ထောင် နဲ. ဆို အိမ်ကို လှည့် ကြည်. နိုင်မှာ မဟုတ်တော.ဘူး ” ဆိုတဲ. သူ တွေက များပါတယ် ၊၊ ဒိလိုနဲ. တော်တန်ရုံ နဲ. အိမ်ထောင် မပြုဖြစ် ကြသူတွေ လည်း တပုံတပင် ပါ ၊၊ အိမ်ထောင် ပြု ကြဖို. မိဘများကတောင် နားချရသည် အထိ အများကြီး တွေ.ရ ကြားရ ဖူးပါသည် ၊၊
“ ငါတို.ဘ၀ ကို ဒီအခြေအနေ ရောက်အောင် ကျွေးမွေး ပြုစု ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတွေကို ပြန်ဆပ် ရအုံးမယ် ကွ ” ဆိုတဲ.စကားမျိုး အမြဲ ကြားနေရပါတယ် ၊၊ တကယ် ကို ၀မ်းသာ ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ် ၊၊ အမှန်တကယ် ဘ၀ အသိ နဲ. ယှဉ်တဲ. ၊ ရင်ထဲကလာ တဲ. စကားလေး တွေပါ ၊၊ ကျွန်တော်. Site ထဲမှာ အသက် ၂၀ ကျော် ၀န်းကျင် လူငယ် အမျိုးသား အမျိုးသမီး လေးတွေ ရှိကြပါတယ် ၊၊ သူတို.ရဲ. အသက် အရွယ် လေးတွေ ဟာ ပညာ ဆက်သင် အုံးမယ် ဆိုရင် ကျောင်းပတ် ၀န်းကျင်မှာ တွေ.ရမဲ. အရွယ် လေးတွေပါ ၊၊ သို.ပေသည်. ဘ၀က ခွင်.မပြုရှုာလေတော. ၊၊ အလုပ်ခွင် ၀င်ရင်း ကျောင်းတဖက် နဲ. မိဘကို တဖက် တလမ်းက ကူညီ နေကြရင်း ပေါ. ၊၊
တစ်လတစ်လ သူတို. ရသမျှ လခလေးကို အ်ိမ်ကို ပြန်ပို. ကြပါတယ် ၊၊ ရသမျှလေးထဲက အသုံးလေး အချို. အ၀က် ချန်လို. အားလုံးကို ပြန်ပို. ကြတာပါ ၊၊ သူတို.ကိုယ် တိုင်တော. ဖြစ်သလိုနေ ၊ ဖြစ်သလိုစား ပြီး ၊ ရောင်.ရဲ ကျေနပ် တင်းတ်ိမ် နေကြ ရှာပါတယ် ၊၊ ခရီးထွက်လို. ပစည်းတွေ ၀ယ်ကြတဲ. အခါ ၊ အဖေဖို. အမေဖို. ၊ ညီလေးဖို. ၊ ညီမလေးဖို. နဲ. သူတို. အတွက် ကတော. ဘာမှမပါ ကြပါဘူး ၊၊ အမှန်တကယ် ကျွန် တော် လက်တွေ.ပါ ၊၊ ဒါတွေကို မြင်ရ ကြားရတဲ. အခါ ပိတိ ဖြစ်မိပါတယ် ၊၊ သူတိုးလေး တွေ အ တွက် လည်း ဂုဏ် ယူ မိပါတယ်၊၊
ဒိလို သိတက် သိသူတွေ ထဲမှာမှ ပိုပြီး သိတက် သူ တွေ အချို.လည်း ရှိပါသေးတယ် ၊၊ အသိတက် လွန်တော. လည်း ကိုယ်. ရဲ. ၀န်က အခြား သူတွေကို ပိစေပါတယ် ၊၊ ကိုယ်ကို တိုင် သတိမပြုမိ ပေသည်. အခြားသူ များ ကို အနေအထို်င် ကျပ်စေပါသည် ၊၊ လာရောက် လုပ်ကိုင် နေသူ အားလုံး ဟာ ကိုယ် မိသားစု အတွက် လာရောက် လုပ်ကိုင် နေကြတာပါ ၊၊ ဒါ.ကြောင်. လည်း အလုပ် ခွင်ထဲကို အချိန်မတန် ပဲ ပင်ပန်း ဆင်းရဲစွာ လာ ရောက် လုပ် ကိုင်နေ ကြတာ ပ ၊၊ ကို ယ် .မိဘ ၊ ကိုယ် .မိသားစု ကို ကိုယ် ပြန်ပို. ချင်သလို ၊ အခြားသူ များလည်း သူ တို. မိဘများကို ပြန်ပို. ချင်ကြပါ လိမ်. မည် ၊၊
ကျွန်တော်. Site ထဲမှ ကောင် လေး တစ်ယောက် သူ. မိဘ အပေါ် အတော် ကို သိတက်ပါသည် ၊၊ ရသမျှ အကုန်ပြန်ပို. သည် ၊။ သူ.အတွက် ကို ချန်မထားတော. ပါ ၊၊ ထိုအခါ အတူနေသူ ဘေးလူ များ အခက်တွေ. ရပါသည် ၊၊ ဒါ.ကြောင် မကြာခဏ ခေါ်ပြော ပေးရသည် ၊၊ သူ.မိဘပေါ် သိတက် တာ မျိုးဆို တော. ပြောရလည်း ခက်သား လား ၊၊ သို.ပေသည်. ဘေးလူတွေ အနေရမကျပ် ဖို. ပြောခဲ. ရဖူး ပါသည် ၊၊
သိတက် မှူကို သဘောကျပေ သည်. ဒီလို မျိုးတော. မဖြစ်စေချင်ပါ ၊၊ ကိုယ့်မိသားစု ပံ့ ပိုးချင်တာတစ်ခုနှင်. တော. ဘေးလူတွေ ကို ၀န်မပိစေချင်ပါ ၊၊ ၀န်မပိုစေချင်ပါ ၊။ ဒါလေးတစ်ခု ကို တော. သတိပြုမိ စေချင် ပါ သည် ၊၊ ခါးပိုက် နှိုက် လုပ်သူ က ငါ.အမေ အတွက် နှိုက်တာ ကွ ၊ ဆိုသလို အ နှိုက်ခံရသူ လည်း အဲဒီ ပိုက် ဆံ တွေက သူ.အမေ အတွက် ယူလာတာ ဖြစ်မှာ ပါ ၊၊ ဒါ.ကြောင်. ကိုယ်.မိဘအပေါ် သိတက်ပါ ၊၊ သို.သော် သူ များ မိဘ အပေါ် ၀န် မပိပါ စေနှင်. လို. ၊၊
မိုးဝေ ( စက်မှူတက္ကသိုလ် )
စိတ်စင်ရာ (လွင်.မျောတက်သော ၊ လွင်.စင်တက်သော စိတ် ၏ ခေါ်ရာသို. )
ဤ်ဇာတ်လမ်းသည် အမျိုးမျိုး ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတက်သော စိတ်၏ ဆန်းကျယ်မူအား စိတ်ကူးအတွေးတစ်ခု ဖြင်.ရေးဖွဲ.ထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ၊၊ မည်သည်. ရည်ရွယ်ချက်တစုံတရာမျှ မပါရှိပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေး ပါရစေ ၊၊
မှတ်မှတ်ယယ အဲဒီနေ.က မမျှော်လင်.ပဲ မိုးက သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာနေခဲ.သည် ၊၊ တိမ်တွေမည်းပြီး နေမင်းကြီးကို အုပ်မိုးထားပေမယ်. တလောကလုံး မှောင်အတိကျနေတာ တော.မဟုတ်ပြန် ၊၊ မထင်မှတ်ဘဲ စွေ လာတဲ.မိုးက မတိတ်ဘဲ ရွာနေတာ ၂ နာရီကျော်ခဲပြီ ၊၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ. မိုးကပိုသည်းလာသလို မိုးရေထဲ ဖြတ်ပြန် ပြေးရမှာလည်း အဝေးသား ၊၊ ဝေ ကိုယ်၌က နန္ဒနဲ. အတူရှိနေချင်သေးတာလည်း ပါသည် ၊၊ ဒီလို မိုးတွေ မည်းပြီး တလောကလုံး မှောင်နေပါစေ ကိုယ် ချစ်တဲ. သူနဲ.အတူ ရှိနေတဲ. ခဏတာ လေးကို ကုန်ဆုံးသွားမှာ စိုးရွံ.နေခဲ.သည် ၊၊
ဆိုဖာဆက်တီပေါ်မှာ အပေါ်အင်္ကျီချွတ်ပြီး လှဲနေတဲ. နန္ဒ က မျက်စိမှိတ်လို. အိပ်များ ပျော်နေပြီ လားမသိ ၊၊ ဖန်ချောင်းဖွင်.မထားဘဲ နံရံကပ် မီလေးသာထွန်းထား တဲ. ၀ါလဲ.လဲ. အခန်းမီးးရောင် က နန္ဒ ရဲ. ဗလာတည်း ခန္တာကိုယ် ကို ပိုပြီး လင်းလက်နေစေခဲ.သည် ၊၊ မောင်ဗမာ တစ်ယောက်လို ကြွက်သားတွေ အမြောင်းမြောင်း ထမနေပေမယ်. ၊ ကျစ်ကျစ် လစ်လစ် ရှိတဲ. နန္ဒရဲ. ခန္တာကိုယ်က ဝေ ရဲ. စိတ်တွေကို ဖောက်ပြန်စေခဲ.တာတော.အမှန် ၊၊
မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆိုဖာခုံပေါ်မှာ ဒူးလေးနှစ်ဖက် ကိုထောင်ပြီး လက်နှစ်ဖက်နဲ. သိုင်းပိုက်ထားတဲ. ဝေရဲ. အကြည်.တွေက နန္ဒ ရဲ. ဘာသာမဲ.တဲ. ဆွဲဆောင်မူ အောက်မှာ အလူးလူး အလိမ်.လိမ်. ၊၊ အာခေါင်တွေ ပင်ခြောက် လို. ၊၊ ရေငတ်သလို ရေဆာသလို မွတ်မွတ်သိပ်သိပ် ပြင်းပြင်းပျပျ ၊၊ အားမလို အားမရ တင်းတင်း ကျပ် ကျပ် ဖတ်ထားမိတဲ. ဒူးခေါင်း နှစ်ဖက်က ဝေ ရဲ. ရင်နှစ်လွှာနဲ. ပူးပူးကပ်ကပ် ၊၊ အေးချမ်းစွာ အိပ်မော ကျ နေတဲ. နန္ဒကတော. တစ်ချက်တစ်ချက် အသက်ရှုသံ ပြင်းပြင်းလေးများ ပင်ထွက်လို. ၊၊
အသားကဖြူဝင်းမနေ ပေမယ်. ရွှေရောင် တောက်နေတဲ. နန္ဒ ရဲ. အသားအရောင်က ယောင်္ကျားတစ်ယောက် အတွက် ပိုပြီးဆွဲဆောင် စေခဲ.သည် ၊၊ ငယ်စဉ်ကတည်းက အားကစားလိုက်စား ပြီး ဖျတ်လတ်တက်ကြွ တဲ. လူ ငယ် တစ်ယောက် ၊ အရပ်မြင်. မြင်. ၊၊ Jean Pant အကျပ်တွေ အမြဲ ၀တ်တဲ. နန္ဒ ကို ဝေ ရင်ခုန်နေခဲ.တာ ကြာပြီ၊၊ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ ကတည်းက အတူတွဲလာတဲ. သူငယ်ချင်း အဖြစ်ထက် မပိုတဲ. နန္ဒ ရဲ.တည်ငြီမ် မူကို အား မလိုအားမရ ဖြစ်မိသည် ၊၊ ယောင်္ကျားတန်မဲ. နီစွေး နေတဲ. နန္ဒရဲ. နှုတ်ခမ်း အစုံကို ရင်ခုန်နေခဲ.တဲ. ညပေါင်း မနည်းတော. ၊၊ စကားပြော လိုက်တိုင်း နိမ်.လိုက်မြင်.လိုက် လှုပ်ရှားနေတဲ. နန္ဒရဲ. လည်တိုင်က အရိုးဖုလေးကို တို.ထိကစားချင် နေခဲ.တာ ကြာလှပြီ ၊၊ သက်ပြင်းမောတွေ အခါခါ ချနေရတာ မြတ်နိုးမေ ဘာသာ အသိ ၊၊ (မြတ်နိုးဝေ ဟု ပြင်ဆင်ဖတ် ရှုပေးပါရန် )
ဖျတ်ကနဲ ၀င်လာတဲ. လေအဝှေ.က အိပ်မောကျနေတဲ.ပြေလျော.နေတဲ.နန္ဒ ရဲ. ပုဆိုးကို လျှောကနဲ ပြေလျော. စေခဲ.သည် ၊၊ ရုတ်တရတ်မို. "ဟယ် " ကနဲ အသံလေးထွက်ပြီး မျက်စိမှိတ်လိုက် ရတဲ. ဝေ ရဲ.ရင်ထဲ မှာ MRT အစီးတစ်ရာ လောက် အပြိုင်မောင်းနေခဲ.သည် ၊၊ တစ်အိမ်လုံးမှာ နှစ်ယောက်တည်း ဆိုတဲ. အသိက ၊၊ အဲဒီ နေ. က ဒေါ်လေးတိုး အိမ် သွားဖို. နန္ဒ ကို အဖေါ်ခေါ်ခဲ. မိသည် ၊၊ လူမနေတဲ.အိမ်မို. တစ်ပတ်တခါ သန်.ရှင်းရေး လာလုပ်ပေးရသည် ၊၊ မနက်ခင်းတုန်းက ကိုရွှေမိုးက ရွာဖို.နေနေသာသာ နေများပင်သာလို. ၊၊
အိမ်သန်.ရှင်းရေးကို နန္ဒက ၀ိုင်းကူလုပ်သည် ၊၊ နေ.လည် ထမင်းအတူစားပြီးတော. တရေးတမော အိပ်အုံး မယ် ဆိုပြီး အိပ်တော.သည် ၊၊ အပေါ်အိင်္ကင်္ျီချွတ်ပြီး ၊ ပုဆိုးတိုတိုနှင်. ဧညိ.ခန်းကဆိုဖာပေါ်မှာ အိပ်တော. သည်၊၊ ဆိုဖာ လက်တန်းပေါ်မှာ ခေါ်င်းတင် ပြီး လက်တစ်ဖက်က နဖူးပေါ်တင် ၊ လက်တစ်ဖက် က ဗိုက်ပေါ်တင်ပြီး ပက် လက်လှန် အိပ်နေတဲ. နန္ဒ ကို မနှောက်ယှက် ချင်တာနဲ. မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆိုဖာပေါ်မှာ ကျုံကျုံ လေးထိုင်ပြီး နန္ဒ ကိုငေး နေမိသည် ၊၊ မကြာမတင် အိပ်မောကျပြီး ထွက်လာတဲ. အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်း က ဝေ ရဲ.အတွေးတွေကို ဖောက်ပြန်စေခဲ.သည် ၊၊ ရုတ်တရတ် ဒူးတစ်ဖက်ကို ထောင်ပြိး ခန္တာကိုယ် ကို ပုံစံပြင် လိုက်တဲ. နန္ဒ ရဲ. ခါးအလွန်.မှာ ၀တ်ထားတဲ. ခါးဝတ်ပုဆိုးက ပြေလျော.သွားခဲ.သည် ၊၊
မိုးကလည်း သည်းသည်းမည်းမည်း ၊၊ နန္ဒ ကို လူပ်နှိုးပြီး ပြန်ဖို.ပြော မလား ၊၊ ပြန်ရမှာလည်း ဒီလိုအချိန်လေး ကို နှမြောတသ ၊ အချိန်တွေကို မကုန်ချင် ၊၊ ရင်တွေခုန်နေတာလည်း အသည်းများပင် ပြုတ်ကျလုမတက် ၊၊ ရေတွေ လည်းငတ်လှပြီ ၊၊ နှုတ်ခမ်းများက မီးတောက် သလို ပူလောင်ပြင်းရှ၊၊ ဒီလိုမွတ်သိပ် တဲ.ဆာလောင် မှူမျိုး တကြီမ် တခါဖူးမျှ မခံစားဖူးခဲ. ၊၊ လက်နဲ. တင်းတင်းဖက်ထားတဲ. ဒူးနှစ်ဖက်က တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည် ၊၊ ခြေဖျား လေး တွေက တဖျတ်ဖျတ် ခုန်နေသည် ၊၊ စိတ်ထင်တိုင်း ပေါက်ကွဲ ချင်စိတ်ကို အံကြိတ်တင်းထား ရတဲ.သွားများ ပင် ပြုတ်ထွက်လုမတက် ၊၊
ဝေအကြိမ်ကြိမ် ထိန်းချုပ်ခဲ.ရတဲ. စောင်.စည်းခဲ.ရတဲ. ရေကာတာကြီး ကျိုးပေါက်ဖို. အား အကောင်းဆုံး အချိန် ၊၊ အရာအားလုံးက ဝေ ရဲ. တိတ်တခိုး လိုအပ်ချက်တွေကို အားဖြည်.ကူညီပေးနေ လေရဲ. ၊၊ လူသူကင်းမဲ.နေတဲ. ခြံကျယ်ကြီးထဲက အိမ်ခန်းလေးထဲမှာ ၊၊ မိုးများ က သည်းသည်းထန်လို. ၊၊ တားဆီးနှောင်.ယှက်မ ယ်.သူ တစ်စုံ တစ်ဦးမှ မရှိ ၊၊ အ၀တ်အစား ကင်းမဲ.နေတဲ. ၊ သန်မာဖွံ. ထွားတဲ. နန္ဒ ရဲ. ယောင်္ကျားပီသတဲ. ခန္တာ ကိုယ်က ဝေရဲ. ဆန္ဒ ဆိုးတွေကို မီးလောင်ရာ လေပင်. နေစေခဲ.သည် ၊၊
ဆိုဖာဆက်တီပေါ်မှ အသာထရ်ျဖွင်.ထားသော ပြတင်းပေါက်များကို ပိတ်လိုက်သည် ၊၊ မိုးတွေက သည်းသည်း မည်းမည်း ရွာတုန်း ၊၊ ခန္တာကိုယ် ပြေလျော.လျော. လေးနှင်. ပက်လက်လှန်ပြီး အ်ိပ်မော ကျနေတဲ. နန္ဒ ရဲ. အ၀တ်အစားမဲ.နေတဲ. ခန္တာ ကိုယ်က ဝေ ရဲ. စိတ်ရိုင်း စိတ်မိုက်တွေကို အားကောင်းတဲ. သံလိုက်နဲ. ဆွဲငင်သလို အသိ ၊ သိက္ခာ ၊ အရှက် ၊ အကြောက် အားလုံးကို ချေမွှ ဖျတ်ဆီး ပစ်လိုက်သည် ၊၊ ကျိုက်ကျိုက်ဆူ နေ တဲ. ဝေ ရဲ. ရင်အစုံက နိမ်.ချည် မြင်.ချည် ၊၊ တင်းကျပ် လာတဲ. ခံစားမူကြောင်. ၊ အ၀တ်အစားတွေ အားလုံးကို ဆွဲချွတ် လိုက်ချင်သည် ၊၊ ဝေရဲ. လက် အစုံက
" နန္ဒ ရေ ၊ နင်နိုး ရင် ပြန်လာခဲတော. နော် ၊ ငါပြန်သွားနှင်.ပြီ "
ဆိုတဲ. စာရွက်လေး က ဆိုဖာဆက်တီ စားပွဲ ပေါ်မှာ weight တုံးလေးနှင် ဖိလို. ၊၊
မိုးရေထဲမှာ တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်ပြန်လာတဲ. ဝေ ကို မိုးစက်လေးတွေက ကောင်းချီး ပေးကြသည် ၊၊ လျှပ်စီး တွေ တဖျတ်ဖျတ် လက်လို. ဂုဏ်ပြုကြသည် ၊၊ ဘယ်လိုလူ တစ်ဦး တစ်ယောက် မှ လွယ်ကူစွာ ကျော်နိုင် ဖို. ရန် ခဲယဉ်းတဲ. ရာဂ တောင်တန်းကြီးကို ကျော်လှန်းနိုင်ခဲ.သည်. ဝေ ၊၊ မောပန်းနွမ်းနယ်တဲ. ခြေလှမ်းများနှင်. ၊၊ ခက်ခဲ ပင်ပန်းကြီးစွာ ဖြတ်ကျော် ခဲ.ရသော ခရီးကြမ်းကြီးအတွက် လေးလံခြင်းများစွာနှင်. ၊၊ ဒါပေသည်. ဝေ အနိုင် ရခဲ.ပါသည် ၊၊ ဂုဏ်ယူပါ တယ် ဝေရယ် ၊၊ ဒီတောင်ကို ကျော်ဖို. အားထုတ်ခဲ.ရတဲ. ဝေ ရဲ. ပင်ပန်း ဆင်းရဲ မူကို ဖြတ်သန်း ခံစားဖူးသူ များသာ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ပေးနိုင်ပါ လိမ်.မည် ၊၊
ဝေ ရဲ. မျက်ဝန်းအစုံက မိုးရေနဲ.အတူကျခဲ.ရတဲ.အပြာရောင်မျက်ရည်များက ပိုရ်ျ
ဒီလိုနဲ. တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ခေါ်သွားလိုက်တာ ကျွန်တော်ပါ ပါသွားရော ၊၊ နောက်ထပ် Counter တစ်ခုက Officer တစ်ယောက်နဲ. တွေ.ရတယ် ၊၊ သူမေးလိုက် ကိုယ်ဖြေလိုက်ပေါ.၊၊ ဒီမှာလည်း အဆင်မပြေဘူး ၊၊ သူတို.ကမေးတယ် အလုပ်ရှာမှာလားတဲ. ၊၊ ရှာပါဘူးလို. ၊၊ အလည်လာတာ လို.ပြောလိုက်တယ် ၊၊ သေချာလားတဲ. ၊၊ Sure လို. ၊၊ နောက်ထပ် တစ်ယောက် ရော စုစုပေါင်း ၆ ယောက် ၊၊ အားလုံး ရွှေတွေ ချည်းပဲ ၊၊ နှစ်နာရီလောက်ကြာ မယ်ထင်တယ် ၊၊ မေးလိုက် ၊ ထိုင်ခိုင်းထားလိုက် ၊၊ နောက်ဆုံး တွက်ပါတယ် ၊၊
စင်ကာပူတော. ရောက်ပြီးပြီ လေဆိပ်ကနေ လှည်.ပြန်ရတော. မယ်လို. ၊၊
မြန်မာပြည် တန်း ပြန် ရပြိထင် ထားတာ၊၊ ပစည်းတွေ လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ. ၊၊ သူငယ်ချင်းတွေတော. ဖုန်းဆက်ပြီး နှုတ်ဆတ်မယ် ပေါ .၊၊ ဟုတ်တယ်လေ ၊၊ သူနိုင်ငံလာတာ လက်မခံပြန် ရမှာပေါ. နော် ၊၊ ဒါပေမယ်. နောက်ဆုံးတော. လက်ဗွေတွေကို Scan ဖတ်ယူထားတယ် ၊၊ နောက် နေထိုင်ခွင်. တစ်လပေးတယ် ၊၊ မင်းအိမ်ဖြူ ဆိုတာ ဒီလိုကောင် ၊၊ လူတိုင်းလွယ်လွယ် ကူကူ ၀င်လာရတယ် ၊၊ ကျွန်တော်တို.က ဒီလိုမျိုး ၊၊ သူများတွေ ဘယ်လောက် လွယ် လွယ် ကျွန်တော် မလွယ်ဘူး ၊၊ အရာရာ ပါ ပဲ ၊၊ ဘယ်အရာမှ လွယ်လွယ်မရခဲ. ဘူး၊၊ ကျွန်တော်. အထက်က အမလုပ်တဲ. သူ က ပြောတယ် ဘ၀ မှာ ဘယ်အရာ ကမှ ငါတို. အတွက် အလ ကား လွယ်လွယ် မရဘူးတဲ. ၊၊ ဟုတ်တယ်ဗျာ ၊၊ ဘယ်သူတွေ လွယ်တယ် ၊ ပြောပြော ကျွန်တော်တို.အတွက်တော. မရဘူး ၊၊
အဲဒီလိုနဲ. Immegration ကနေ ထွက်လာရော ဆိုပါတော.ဗျာ ၊၊ အိတ်တွေက Belt ပေါ်မှာတောင် မရှိတော.ဘူး ၊၊ ဟိုးဘက် ထောင်. လေးမှာ ပုံလို.ဗျာ ၊၊ စောင်.နေတဲ. သူတွေတောင် မရှိတော.ဘူး ၊၊ ကျွန်တော်. ကို လေယာဉ်ချိန် မှားပြီးလာ ကြိုတဲ. သူငယ်ချင်း တရုတ်မ(နာမည်ပါ ၊ လူတရုတ်မ မဟုတ်ပါ ) အတွက်တော. အဆင်ပြေသွားတာပေါ.ဗျာ ၊၊ စောင်.စရာမလိုတော. ဘူးလေ ၊၊ ကျွန်တော်. သူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုဂရုစိုက် ကြတာ ၊၊ သူက သူလာကြို မယ်ထင်လို . သူ က သူသွားကြိုမယ် ထင်လို.နဲ. လေ ၊၊ ကြည်စားတာပါ ၊ တကယ်ကို နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုပါတယ် ၊၊ လိုမယ်ထင်တာ လည်းအားလုံး လုပ်ထားပေး ကြတယ် ၊၊
MRT Card ကအစ အဆင်သင် . ၊၊ Sim Card လည်း ၀ယ်ထားပေးပြီးသား ၊၊ Hand set ထဲ ထည်.လိုက်ရုံပါပဲ ၊၊ Phone No က မြန်မာပြည် ကနေ အလုပ်လျှောက်ကတည်း က ထည်.လျှောက်ထားပြီလေ ၊၊ ပထမဆုံး နေရတဲ. အိမ်က Yishun ဘက်မှာ ၊၊ MRT station နားမှာပဲ ၊၊ မှတ်မှတ်ယယ Blk 752 တဲ. ၊၊ သတိယနေ သေးတယ် ၊၊ Taxi ခလည်း တရုတ်မ ပဲ ပေးသွားတယ် ၊၊ ရောက်ရောက်ချင်း ပဲ အထုပ်တွေ ချပြီး City Hall ကို လိုက်ပို.ပါတယ် ၊၊ တကယ်ကို ဒီမှာ ရောက်နှင်. နေတဲ. သူငယ် ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊၊
လုပ်ပေးသင်. တာ လုပ်ပေးတယ် ၊၊ ပြောပြသင်.တာ ပြောပြတယ် ၊၊ သင်ပေးတယ် ၊၊ အလုပ်ရှာတာကမှ အစ ၊ Interview သွားတာ အဆုံး ၊၊ အ၀တ်အစား ဘယ်လိုဝတ် သွား ဆိုတာပါ မကျန် ၊၊ ဘယ်နေရာ ရောက်နေနေ မသွားတက်တော.ရင် လှမ်းမေး လိုက် ၊၊ အကုန်လုံး စိတ်ရှည် လက်ရှည် ပြောပြတယ် ၊၊ ပိုက်ဆံလည်း ချေးပေးတယ် ဗျ ၊၊ ဒီလိုနဲ. အဲဒီ ညနေ City Hall ကို သွား ကြရောပေါ.ဗျာ ၊၊